အစော ပိုင်းက အစ်မကြီး ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် သိပ်ရင်းနှီးခြင်း မရှိပါ။ ကျွန်တော် တပ်ထဲနေစဉ် ကျွန်တော့်ဇနီးကလည်း မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက် ရေးအသင်း၊ တပ်မတော် အမျိုး သမီးများအသင်း စတာများမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရရင်း အစ်မကြီး နှင့် လုပ်ငန်းအရ တွေ့ဆုံခင်မင်မှု တော့ ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်ကတည်း က ကျွန်တော့်ဇနီးက ပြောဖူးသည် မှာ အစ်မကြီးအား လူအတော်များ များက ဝိုင်းကြည်ညိုလေးစားခြင်း ကြောင့် ဖဆပလ ဝန်ကြီးကတော် များက အတော်မရှုဆိတ် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ နောက်ပိုင်း သံအမတ် ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အငြိမ်းစားယူ ပြန်လာသည့်အခါ ကျမှ ကျွန်တော်တို့နှင့် ပိုမိုရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အစ်မကြီးက တက္ကသိုလ်ရိပ် သာလမ်းတွင် မိန်းကလေးအဖော် နှစ်ဦးသုံးဦးနှင့် နေထိုင်ကာ ပန်းစိုက် အလွန်ဝါသနာပါသဖြင့် ခြံထဲတွင် ပန်းအမျိုးမျိုးစိုက် ကာ ပန်းများကို လည်း အလှတကြည့်ကြည့်နှင့် နေတတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုတွေကိုလည်း မလာတာ ကြာလျှင် ဖုန်းဆက်ခေါ်တတ်ပါ သည်။ အထူးသဖြင့် ဇူလိုင် ၁၉ ရက် အနီးဝန်းကျင်တွင် သူ အရင်း နှီးဆုံး မိသားစုမိတ်ဆွေများကို တစ်ရက်စီခွဲ၍ မိသားစုလိုက် ထမင်း ဖိတ်ကျွေးတတ်ပါသည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ သြဂုတ်လအထိ မပြတ်ဆက် တိုက် ထမင်းကျွေးရသည့်အခါများ ရှိတတ်ပါသည်။ အစ်မကြီးအိမ်တွင် နိုင်ငံရေး သမားဟောင်းကြီးများ၊ သံတမန် ဟောင်းများ၊ တပ်မတော်မှ ပင်စင် ယူ သွားသူများ၊ တောပြန်များ၊ လူစုံ ဝင်ထွက်သွားလာရာ သတင်းစုံ ရတတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မဆလခေတ် အစိုးရ၏ မတော် မတည့် ပြုမူ ချက်များအားလုံးကို သူ့ရှေ့ တွင် လူများက လာ၍ရင်ဖွင့် ပြောဆိုတတ်ရာ ကျွန်တော်တို့ သူ့အိမ်သွားလည်လျှင် သတင်းစုံ ကြားရတတ်ပါသည်။ သူ့အိမ်သည် ဘေးမဲ့တောကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီး လွတ် လွတ်လပ်လပ် ပြောဆို နိုင်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ မဆလအစိုးရကလည်း ဒါကို သိပုံရပါသည်။ တစ်ခါတော့ ဒေါ်ခင်ကြည်အိမ် သူခိုးခိုးခံရသည်ဟု သတင်းထွက်လာရာ ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်ဇနီးတို့ ကမန်းကတန်း သွားရောက်သတင်းမေးရပါသည်။ သူ့အိမ်တွင် အပြင်လူဆို၍ ဥယျာဉ် စောင့်(မာလီ)တစ်ဦးသာ ရှိသည်။ သူခိုးက အိမ်အပေါ်ထပ်ကို ဝရန်တာမှ ခို၍တက်ပြီး အိပ်ခန်းဗီရိုလေး ထဲတွင် ထည့်ထားသည့် အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးများကိုသာ ယူသွားပါသည်။ ထိုပစ္စည်းလေးများမှာ အစ်မကြီး သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကရော၊ နောက်ပိုင်း ကာလများတွင်ရော နိုင်ငံခြား သံတမန်များက အမှတ်တရပေး သည့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ သာ ဖြစ်ပါသည်။
အဖိုးတန်ပစ္စည်း မပါပါ။ ဥယျာဉ်စောင့်က လက် ထောက်ချပုံ ရပါသည်။ ဒေါ်ခင်ကြည် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဤကဲ့သို့ပင် ထင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဒေါ်ခင်ကြည် နှင့်
နောက်ပိုင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံလာရင်း သူမ၏ မျိုးချစ်စိတ်ရှိမှု၊ တည်တည်ကြည်ကြည်နှင့် ဣနြေ္ဒ သိက္ခာရှိစွာနေရင်း သူမအား လာရောက်ကြည့် ရှုကြသည့်
ဗိုလ်ချုပ်၏ တပည့်သားမြေးအားလုံးအပေါ် စိတ် ကောင်း၊ စေတနာကောင်း ပြည့်ဝ စွာနှင့် ပေးတန်ပေး၊ ကျွေးတန်ကျွေး၊ အကြံပေးစရာပေးနှင့် နာယကဂုဏ် ပြည့်ဝစွာ နေထိုင်နေမှု၊ လာရောက် သမျှ လူအားလုံးကလည်း သူမ အား လေးစားကြည်ညိုမှု စတာများ ကိုမြင်တွေ့လာရပါသည်။ ဤကဲ့သို့ မြင်တွေရ သည့်အခါများ တွင် သြော် … ဗိုလ်ချုပ်များ ဒါတွေကို မြင် တွေ့ရရင် ဘယ်လောက်များ ဝမ်း သာရှာလေမလဲဟု ဗိုလ်ချုပ်အား တမ်းတမိပြန်ပါတော့သည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နိုဘယ်လ်ဆုရကြောင်း ရေဒီယို သတင်းကြေညာစဉ် မှာလည်း ကျွန်တော်သည် သြော်.. အစ်မ ကြီးများရှိရင် ဘယ်လောက်များ ဝမ်းသာရှာမလဲဟု အစ်မကြီး ဒေါ်ခင်ကြည်အား တမ်းတမိပြန်ပါသည်။ ထိုတက္ကသိုလ်ရိပ်သာဝင်းထဲတွင် ကျွန်တော်တို့ သွားတိုင်း နောက်တစ်အိမ်ဝင် ရောက်လည်ပတ် ရပါသေးသည်။ ထိုဝင်းထဲတွင် တစ်ထပ်အိမ်ကလေးဆောက်၍ မှီခို နေထိုင်သော ဒေါ်ခင်ကြည်၏အစ်မ ဒေါ်ခင်ကြီး(သခင်သန်းထွန်း၏ဇနီး) ၏ အိမ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ခင်ကြီးမှာ သိပ်ကျန်းမာရေး မကောင်းလှဘဲ သားသမီးလေးများနှင့် ထိုအိမ်ဝင်း အတွင်းမှာပင် နေခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်၏ ကျန်ညီမများလည်း ထို ဝိုင်းထဲတွင်ပင် သီးခြားအိမ်ကလေး များဆောက် ၍ နေကြပါသည်။
9/17/2011 06:02:00 PM
လစ်ဗျား ယာယီအစိုးရကို ကုလ အသိအမှတ်ပြု
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ လစ်ဗျားအသွင်ကူးပြောင်းရေး ကောင်စီကို ကုလသမဂ္ဂမှာ လစ်ဗျားရဲ့ ကိုယ်စားပြုနေရာအဖြစ် မဲခွဲဆုံးဖြတ် အတည်ပြုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့် အထွေထွေ ညီလာခံမှာတော့ NTC လို့ခေါ်တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကောင်စီ အနေနဲ့ လစ်ဗျားနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး တတ်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံ ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေဟာ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ဂဒါဖီတပ်တွေရဲ့ ကျန်နေတဲ့ ခြေကုပ်စခန်းတွေကို အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာပဲ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် အတော်များများကတော့ ဒီ
ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကို ထောက်ခံကြောင်း ပြောဆိုလာကြပါတယ်။
ယာယီအစိုးရတပ်တွေဟာ သဲကန္တာရထဲက ဘန်နီ ၀ါလစ် (Bani Walid) မြို့ကို ၀င်ရောက်ပြီး အဲဒီမှာ ဂဒါဖီ သစ္စာခံတပ်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့တွင်းကနေ လက်ဖြောင့်သေနတ်သမားတွေ ချောင်းမြောင်း ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် အစိုးရတပ်တွေဘက်က ပြန်လည် ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂဒါဖီရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ ဆာ့တ် မြို့မှာလည်း အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကောင်စီရဲ့ တပ်တွေဟာ ဂဒါဖီသစ္စာခံတွေရဲ့ ခုခံမှုကို အပြင်းအထန် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ နေတိုးတိုက်လေယာဉ်တွေကလည်း ဆာ့တ်မြို့ပေါ်မှာ ပျံသန်းနေကြပြီး ကမ်းရိုးတန်းမြို့တလျှောက်လုံးမှာ သေနတ်သံတွေ ပေါက်ကွဲသံတွေနဲ့ မီးခိုးတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတယ်လို့ မျက်မြင်တွေက ပြောပါတယ်။ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ဂဒါဖီတပ်တွေရဲ့ ခြေကုပ်နေရာတွေကို သိမ်းယူနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ ဂဒါဖီကတော့ ဘယ်ရောက်နေသလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိရသေးပါဘူး။
နိုင်ဂျာ (Niger) အစိုးရကတော့ ဂဒါဖီရဲ့ သားတဦးဖြစ်တဲ့ ဆာဒီ (Saadi) ကို
ဖမ်းထားပြီး သူ့ကို လစ်ဗျားနိုင်ငံကို ပြန်ပို့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ ကြေညာထားပါတယ်။ ဂဒါဖီရဲ့ လက်ထောက်တွေ မိသားစုဝင်တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်တွေအတွင်း ကတည်းက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
မနေ့က သောကြာနေ့မှာပဲ လစ်ဗျားနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကို လျော့ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ လစ်ဗျား ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းမှာ ပုံမှန်အခြေအနေတွေ ပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက် အရင်တုန်းက နိုင်ငံပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီနဲ့ ဗဟိုဘဏ်တွေကို အရေးယူထားတာတွေကို ပြန်လည် လျှော့ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လစ်ဗျားနိုင်ငံကို အကူအညီတွေပေးဖို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တခု ဖွဲ့ရေးကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
9/17/2011 05:59:00 PM
ရက်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး တိုက်ရိုက်ခန့်မည်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးနောက် အမျိုးသား
လွှတ်တော်နှင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်း ကျင်းပသော ပထမဆုံး လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံသစ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့က ပြုလုပ်နေသည်ကို MRTV4ရုပ်မြင်သံကြားမှ ထုတ်လွှင့် ပြသနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP/MRTV 4)
ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့် က ရပ်ကွက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို လူထုဆန္ဒမဲနဲ့ ရွေးချယ်ဖို့ အဆို တင်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးကိုကို က အဲဒီ အဆိုကို လက်မခံဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက် အဆိုတင်သွင်းပြီး မဲခွဲ ဆုံးဖြတ် ပယ်ချ ခဲ့တယ်လို့ သိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ညအိပ် ဧည့်သည်တွေကို ဧည့်စာရင်း တိုင်တဲ့အခါမှာ ငွေကြေးမယူဖို့ ဦးသိန်းညွန့်က ဆက်လက် တင်သွင်းခဲ့တာကိုလည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက သဘောမတူကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး မဲခွဲကာ ပယ်ချ ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
9/17/2011 05:58:00 PM
တောင်ငူရေကြီး ရေဘေးဒုက္ခသည် ၉,၀၀၀ ကျော်ရှိ
နယူးဒေလီ(မဇ္စျိမ) ။ ။ ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့ စစ်တောင်းမြစ် အရှေ့ဘက်ခြမ်း တခုလုံးနှင့် အနောက်ဘက်ခြမ်း များတွင် စတင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှစ၍ ရေလွှမ်းမှုများ ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာ ရေဘေးဒုက္ခသည် ၉,၀၀၀ ကျော် နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် အဝေးပြေးကားဝင်းများ အတွင်းတွင် နေထိုင်နေကြရဆဲ ဖြစ်သည်ဟု မြို့ခံများကပြောသည်။ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့ ဒေသခံများအခေါ် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ စစ်တောင်းမြစ်နှင့် နီးသည့် ရပ်ကွက် (၁) ထီးလှိုင်၊ အုတ်ကျိုးတန်း၊ အလယ်ကျွန်း၊ ရပ်ကွက်(၁၉)နှင့် မြို့ဆင်ခြေဖုံး ရက်ကွက် ဖြစ်သည့် မြို့ကြီး ရပ်ကွက် အပါအဝင် ၆ ရပ်ကွက် ရေမြုပ်သွားခဲ့ကာ အရှေ့ဖက်ကမ်းရှိ ဆင်သေဦး၊ ကချောင်း၊ မိုးကောင်းနှင့် ညောင်ပင်သာ စသည့် ရပ်ကွက်များ ရေလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ဆွာချောင်းဆည်၊ ပသိဆည်နှင့် ခပေါင်းချောင်းဆည်တို့ စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက် ကျော်လွန်ခြင်းကြောင့် မြို့ခံများကို ကြိုတင် အသိမပေးဘဲ ဆည်ရေဖောက်ချရာမှ ရေလွှမ်းမိုးခံရခြင်း ဖြစ်သည်။“မိုးကမကြီးဘူးခင်ဗျာ့။ မိုးက ဒီလောက်ကြီးတက်လာလောက်အောင် ရေက မကြီးဘူး။ အရင်လ ၆ ရက်လောက် တုန်းကတည်းက
ရေက ရှိနေတာဗျာ။ ရေကရှိနေတုန်း ကျသွားလုလု အခြေအနေလေးမှာ ဆည်က ရေတွေ ထပ်လွှတ်လိုက်တော့ ရေက ပြန်တက်လာတာ။ ဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲ” ဟု စစ်တောင်းမြစ် နောက်ဖက်ကမ်းမှ ဒေသခံ တဦးက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။တောင်ငူမြို့ ရှေ့ဘက်ကမ်းနှင့် အနောက်ဘက်ကမ်းကို စစ်တောင်းမြစ်ကို ခွကျော်၍ ဆောက်လုပ်ထားသော သံဘောင် တံတားက ဆက်သွယ်ထားသည်။ သံဘောင်တံတား အရှေ့ဘက်ကမ်း ဆင်သေဦး ရပ်ကွက်တွင် ရေကြီးမှု အများဆုံး ဖြစ်နေသည်။“အရင်ထက်တိုးလာတယ်ဗျာ့။
စခန်းတခုမှာ ဘုရားတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပေါ့လေ အဲဒီမှာ လူဦးရေ ၃၀၀ ထက်မနည်းရှိတဲ့ စခန်းတွေရှိတယ်။ အနည်းဆုံး စခန်းကတော့ ၃၀၀ ပဲဗျာ့။ အများဆုံးကကော့ ၆၀၀ ဝန်းကျင်ပါပဲ။ အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် လူဦးရေက ၉,၀၀၀ နဲ့ ၁၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်မှာ ရှိတယ်” ဟု မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။လောကုတ္တရာဘုရား၊
ထီးလှိုင်ဘက်မှ ရွှေဂူကြီးဘုရား၊ အဝေးပြေးကားကွင်း စသည့်နေရာများတွင် ရေဘေး ဒုက္ခသည်များ ရာနှင့်ချီ ရှိနေကြပြီး စုစုပေါင်း ရေဘေး ဒုက္ခသည်များ နေထိုင်နေသည့် စခန်းပေါင်း ၂၀ ရှိနေသည်။ ယခင်ရေကြီးချိန်များတွင် စာသင်ကျောင်းများ အတွင်း နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့သော်လည်း စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည် ဖွင့်လာသည့် အတွက် အခန်းအပိုရှိနေသည့် အမှတ် (၅) အထက ကျောင်းတွင်သာ
ရေဘေးဒုက္ခသည်များ ရှိနေတော့သည်။ကျောင်း ၇ ကျောင်းမှာ ရေမြုပ်နေဆဲဖြစ်ကာ ကလေးများမှာလဲ မိဘများနှင့်တတူ ရေဘေးစခန်းများတွင်ရှိ နေပြီး ဆရာ၊ ဆရာမများမှာလည်း သွားရေးလာရေး ခက်ခဲမှုများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပိတ်ထားရဆဲ ဖြစ်သည်ဟု တောင်ငူမြို့ခံ ဦးစိန်ထွန်းမှ ဆိုသည်။ယခုကဲ့သို့ ရေကြီးခြင်းမှာ မိုးတွင်းကာလအတွင်း သုံးကြိမ်မြောက် ရေကြီးခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်ရေကြီးချိန်များတွင်ရေဘေးဒုက္ခသည်များ အတွက် ကူညီထောက်ပံ့၊ လှူဒါန်းသူများရှိခဲ့သော်လည်း ယခုတကြိမ်တွင် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ FAO မှ ဆန်အိတ် ၄၅၀ လှူဒါန်းခဲ့သည်မှ လွဲ၍ တခြား ကူညီထောက်ပံ့သူများ မရှိသလောက်ဟု ဒေသခံများ အဆိုအရ သိရသည်။“သွားရေးလာရေးကိုတော့
လှေကလေးတွေနဲ့ပေါ့။ နဂိုကတည်းကနေ ဒီဒေသမှာ လှေကလေးတွေ ရှိတယ်။ ဝါးဖောင်တွေ
လုပ်တယ်။ ကားကျွတ်တွေ သုံးခု၊ လေးခုလောက် လေထိုးပြီးတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ သစ်သားပြား တင်ပြီးတော့ အရပ်ပုံစံသွားနေရတာ” ဟု ဦးစိန်ထွန်းက ပြောသည်။ရေကြီးချိန်တလျှောက်
မြို့နယ်ရဲမှူးကြီးမှ လိုက်လံ ကြည့်ရှုနေခဲ့သော်လည်း ယခုချိန်ထိ ထိရောက်သည့်
တစုံတရာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ မရှိသေးဟု ဒေသခံက ဆက်ပြောသည်။ သွားရေးလာရေး ခက်ခဲမှုများကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းများ မတက်သော်လည်း အရောင်းအဝယ်က မရှိသလောက် ပါးနေသည်။ စစ်တောင်းမြစ်ရေမှာလဲ ယခုအချိန်ထိ စိုးရိမ်မှတ် အထက်တွင် ရှိနေသေးသည်။မိုးတွင်းကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ တဝန်းလုံးတွင် မိုးများခြင်းကြောင့် မြစ်ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး
လာမည့် အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလများအတွင်း တရုတ်ပင်လယ်မှ လာမယ့် မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန် တိမ်တိုက်များ အနောက်ဘက်သို့ လာမည်ဆိုပါက မိုးလွန်ကာလများတွင်
မိုးထပ်ရနိုင်သည့် အပြင် မြစ်ချောင်းများ အတွင်း ရေပြည့်နေသည့် အတွက် မြစ်ရေလျှံမှုများလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒမှ ခန့်မှန်းထားသည်။
9/17/2011 05:55:00 PM
ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်များကို UWSA ရှင်းလင်း
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဗဟိုအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ဝ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များက ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုကို အကြောင်းကို အောက်ခြေတပ်များသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုမှာ သောကြာနေ့တွင် ပြီးဆုံးသွားသည်။အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဦးအောင်သောင်း၊ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးသိန်းဇော်တို့ ဦးဆောင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အချို့ လိုက်ပါလျက် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဝ အထူးဒေသ (၂) UWSAခေါင်းဆောင်များနှင့် စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ဆွေးနွေးရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရန်၊ ဆက်ဆံရေးရုံးများ ထူထောင်ရန်၊ ဝ နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဆွေးနွေးသွားကြရန်နှင့် နှစ်ဘက်တပ်များ နယ်ကျော် ဖြတ်သန်းလျှင် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်တို့ သဘောတူညီမှုရခဲ့သည်။အဆိုပါ သဘောတူညီမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ UWSA ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ ရှမ်းပြည်(မြောက်ပိုင်း) ပန်းဆန်းမြို့၌ မြို့နယ်၊ ခရိုင်နှင့် တပ်မဟာအရာရှိများ ၁၃ဝ ကျော်ကို နှစ်ရက်ကြာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ကျနော်တို့မှာ အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းတွေက အထက်က ဦးဆောင်တာကိုဘဲ သဘောတူပါတယ်”ဟု အမည်မဖော်လို သော ဝ တပ်မှူးက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။မြန်မာအစိုးရဘက်က ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးအောင်သောင်းတို့နှင့် အတူ ရှမ်းပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်သူ၊ ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ် ဦးမောင်မောင်၊ တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ထွန်းမြင့်၊ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာမှ ဖွဲ့ဖြိုးရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မြင့်နှင့် ဝ အဖွဲ့မှ နိုင်ငံခြားရေးအရာရှိ ဦးကျောက်ကွမ်းအမ်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေး တာဝန်ခံ ဦးပေါက်ယူလျန်၊ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအောင်မြင့်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သော်လည်း စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ ထုတ် နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ဦးသိန်းဇော်နှင့် ဦးအောင်သောင်းတို့ အမည်များကို ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးလိုပါက သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်
အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရန် ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက် ရက် ၂ဝ အကြာတွင် UWSA အဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့မှု ပထမဆုံး ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။အစိုးရဘက်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုကို ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်သော ဦးသိန်းဇော်မှာ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ကနေပြည်တော်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးလိုက်သည့် တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည်။ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေး
တိုက်နေကြသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ တပ်များကို အစိုးရ စစ်တပ်အောက်သွတ်သွင်းမည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေးကို ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကတည်းက မြန်မာအစိုးရက ကြိုးပမ်းနေခဲ့သော်လည်း အင်အား နှစ်သောင်းကျော်ရှိ ဝ အဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးမှုတွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခြင်းမရှိတော့ပေ။အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝ ခေါင်းဆောင်များ ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန်အတွက် နေရာ၊ အချိန်ကိုမူ မသတ်မှတ်ရသေးပေ။အလားတူ
UWAS ရုံးများ ဖွင့်လစ်တော့မည် ဖြစ်၍ UWSA နယ်မြေအတွင်း မြန်မာအစိုးရဘက်မှ
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သစ်တော၊ ကြေးနန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး စသည့် ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ဝ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အတွင်းသို့ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာမည်ကို ဝ အောက်ခြေတပ်များကို အသိပေးထားသည်။ ယမန်နှစ် ဧပြီလတွင် NGO များနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ဝ ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှ ထွက်ခွာရန် ထိုစဉ်က စစ်အစိုးရမှ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ယခင်က ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်၊ မူဆယ်၊ လားရှိုး၊ တန့်ယန်း စသည့်မြို့များတွင် UWSA ရုံးများ ဖွင့်လစ်ခဲ့သော်လည်း နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းရေး တင်းမာမှုစတင်သော ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစ၍ ဆက်ဆံရေးရုံးများ ပိတ်သွားခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနှင့် တွဲ၍ နာမည်ဆိုးထွက်သော UWSA မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ပေါင်းဖွဲ့ထားသည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် အဖွဲ့တခုဖြစ်သည်။ သို့သော်
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ကမူ တဖွဲ့ချင်းထုတ် ဖိတ်ခေါ်မှုကို “သပ်လျိုဖြိုခွဲ”မှုဟု ဆိုကာ လက်မခံဘဲ အဖွဲ့တခုလုံးအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရဖွဲ့စည်းမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့အကြား
တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးလိုသည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောကြားချက်ကို တုံ့ပြန်ထားသည်။“သူတို့ရဲ့ ပထဝီ အနေအထားအရ တချို့ ကိစ္စတွေမှာ အခြေအနေ မတူဘူး။ အဲဒီမတူတဲ့အပေါ်မှာ တဘက်မှာ ကျနော်တို့ UNFC ခတ်ကျဲကျဲနေတဲ့ သဘော။ သူတို့က တရုတ်ရဲ့ သဘောထား အပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေရတယ်လေ။ အဲဒီအနေအထားနဲ့ ကိုက်ညီအောင် သူတို့ နေရတဲ့ သဘောဘဲ”ဟု UNFC အဖွဲ့တွင်းရေးမှူးနိုင်ဟံသာ က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ဝ နှင့်တွေ့ဆုံမှုအပြီး နောက်တရက်ဖြစ်သော စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် UNFC တွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် အခြားအဖွဲ့
တခုဖြစ်သည့် မိုင်းလားခေါ် ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းရှိ အထူးဒေသ (၄) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ဝ ကဲ့သို့ပင် သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။အင်အား ၃
ထောင်ကျော်ရှိ မိုင်းလားအဖွဲ့မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံပေ့၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးအိုက်ရှဲန်လာ၊ ဒုစစ်ဦးစီးမှူး ဦးလမ်းအောင်၊ ဆက်ဆံရေးမှူး ဦးဇင်ခမ်းနော်တို့တက် ဆွေးနွေးမှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ပြောသည်။“အခုလို
ဝ နဲ့ မိုင်းလားကို ဆွဲခေါ်လို့ ရတဲ့အပေါ်မှာ သူတို့ (အစိုးရ) အတွက် အမြတ်ထွက်သွားတာပေါ့။ ဒါကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြီးတော့ အများမြင်သာအောင် ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ UNFC ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ငြင်းပယ်လိုက်တာဘဲ”ဟုနိုင်ဟံသာက ပြောသည်။ သစ်ထူးလွင်
9/17/2011 05:54:00 PM
မြန်မာပြည်အရေး စိုးရိမ်စရာများ ရှိသေးဟု ဟီလာရီ ကလင်တန် ပြော
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က မြန်မာပြည်တွင် ကြိုဆိုထိုက်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တိုးတက်မှုများကို မြင်ရကြောင်း၊ သို့သော် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် အထူး မေးခွန်းထုတ်စရာနှင့် စိုးရိမ်စရာများ ဆက်ရှိနေသေးကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
သြစတြေးလျ-အမေရိကန် ဝန်ကြီးအဆင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှ သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကီဗင် ရပ်ဒ်နှင့် အမေရိကန်
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (ဓာတ်ပုံ - AP)
သီတင်းပတ်တွေမှာ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ကြိုဆိုထိုက်တဲ့ လုပ်ဆောင်လာမှုတွေကို မြင်ရပါတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို အကောင်းဆုံး နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ကျမတို့အပါအဝင် တခြားသူတွေအတွက် ဒါ အရေးကြီးပါတယ်” ဟု မစ္စက် ကလင်တန်က ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့တွင် ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သော သြစတြေးလျ-အမေရိကန် ဝန်ကြီးအဆင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် မူဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးမှူး မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်၏ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်သော ၆ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အတိုက်အခံများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်၏ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်အပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ ပြောကြားချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။“ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း
ပြောရရင် ကျမတို့အနေနဲ့ အထူး မေးခွန်းထုတ်စရာ၊ စိုးရိမ်စရာကိစ္စတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိနေပါသေးတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအပေါ် အစိုးရရဲ့ ဆက်ဆံပုံ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် လွှတ်ရေးကနေပြီးတော့ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်ဆံရေး အထိပါပဲ” ဟု မစ္စက် ကလင်တန်က ပြောသည်။သို့သော်
မြန်မာအစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အရေးကြီးသော အပြောင်းအလဲများ လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရက စတင်ပြောဆိုလာခြင်းတို့အပေါ် ကြိုဆိုသည်ဟု မစ္စက် ကလင်တန်က ဆက်လက်ပြောသည်။ဗီဒီယိုသတင်းထောက်
ကိုစည်သူဇေယျကို ထောင်ဒဏ် နောက်ထပ် ၁၀ နှစ် တိုးလိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ပြောသလို အခိုင်အမာ လုပ်ဆောင်ပြရန် မစ္စက်
ကလင်တန်က တိုက်တွန်းသည်။ပူးတွဲသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သြစတြေးလျ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကီဗင် ရပ်ဒ်ကလည်း လွန်ခဲ့သည့် ၂ လက သူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်စဉ် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် သဟဇာတ ဖြစ်လိုလျှင် ပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီရေးကို တိုးတက်အောင် အရင်ကြိုးပမ်းသင့်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်ကဲ့သို့ပင် သြစတြေးလျသည်လည်း မြန်မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီအရေး သေချာခိုင်မာသော ခြေလှမ်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ပြောသည်။အမေရိကန်-သြစတြေးလျ
ပူးတွဲကြေညာချက်၌ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ လက်နက်မပြန့်ပွားရေး ဆုံးဖြတ်ချက် စသည်တို့ကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပြီး မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။တဆက်တည်းတွင် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဘိုလီးဗီးယားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားတို့သည် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။ယင်း ၃ နိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ထိရောက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အားထုတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု သမ္မတ အိုဘားမားက သတ်မှတ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီး
ဗစ်တိုရီးယား နူလန်က ဆိုသည်။ဘိုလီးဗီးယားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားတို့အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ကို အမေရိကန်က ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီး အစီအစဉ်တချို့အတွက် ထောက်ပံ့ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုမူ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတခုမျှ လျှော့ပေါ့ပေးမှု မပြုလုပ်ရသေးကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား၏ သတ်မှတ်ချက်အရ မူးယစ်ဆေးဝါး အဓိက ရောင်းဝယ်သော၊ ထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံများမှာ
မြန်မာနိုင်ငံပါအဝင် ၂၂ နိုင်ငံရှိသည်ဟု သိရသည်။
9/17/2011 05:53:00 PM
ရေအားလျှပ်စစ် ညွှန်မှူးရွာ မီးမလင်းပါ
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား မဖြစ်မနေ နောက်မဆုတ်တမ်း ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဟု လျှပ်စစ် ၁ ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက မီဒီယာများအား ပြောကြားလိုက်သည့် အထဲ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိ ရရှိထားသော မဂ္ဂါဝပ် ၁,၅ဝဝ မှာ သုံးမကုန်နိုင်ဘူးဟု ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျေးလက်တောရွာပေါင်း ၆ သောင်းကျော် ရှိသည့်အနက် ၂ ထောင်ကျော်သာ လျှပ်စစ်မီး
ပေးနိုင်သေးကြောင်း လျှပ်စစ် ၂ ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးက လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားသွားခဲ့ပြန်သေးသည်။
ထိုကဲ့သို့ လျှပ်စစ်မီး မရသေးသည့် ကျေးရွာပေါင်း ၅ သောင်း ၈ ထောင်ထဲတွင် ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ဇာတိရွာလည်း ပါဝင်သည်။ မြို့ကြီးများ မီးပြတ်ရခြင်း အပါအဝင်၊ ကျေးလက်တောရွာများ မီးမရသည့် အကြောင်းကို ညွှန်/မှူး ဦးတင်ဝင်းအား မဇ္ဈိမ
သတင်းထောက် ကိုပေါက် က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။ ညွှန်/မှူးက မီးပြတ်ရခြင်းမှာ တိုင်းပြည်၏ ဓန အင်အားနှင့် နည်းပညာ အားနည်းနေ၍ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသွားသည်။
လွိုင်ကော်မြို့နယ် အတွင်းတွင် တည်ရှိသော ဘီလူးချောင်း(၂) ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ (Photo :: http://moep1.wordpress.com)
မေး။ ။ဒီ မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြီးကို ဘယ်လိုသုံးသပ်ချက် ပေးနိုင်မလဲဗျ။ အားသာချက်တွေ ဘယ်လို
တွေ ရှိမလဲ။ အားနည်းချက်တွေ ဘယ်လိုတွေရှိမလဲ။
သုံးသပ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ဗျာ ဗမာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ အများကြီး အကျိုးရှိမယ့် စီမံကိန်းပဲဗျ။ မီးလင်း လာမယ်ဗျာ။ မီးတွေ များလာမယ်။ အဲဒီမှာ လမ်းကြီးတွေ ကောင်းသွားမယ်။ တံတားကြီးတွေ ဖြစ်လာမယ် ထင်တာပဲ။ ဒါတွေကတော့ မရှိဆင်းရဲတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်ကတော့ အားကိုးစရာတွေပဲလို့ ထင်တာပဲ။
မေး။ ။ တနေ့က ဝန်ကြီး ရှင်းလင်းပြသွားတဲ့အထဲမှာတော့ ရှိတဲ့ မီဂါဝပ် ၁,၅ဝဝ ဟာ သုံးလို့မကုန်ဘူး။ ဒါကြောင့်
ဒီက ထွက်သမျှကို သူများရောင်းရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီစကားအရ မြန်မာပြည်မှာ သုံးမယ့်သဘော မရှိဘူးလို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဖြေ။ ။
ခုတော့ ကျနော်တို့က နိုင်ငံခြားက ဝယ်သုံးတဲ့ဟာလည်း သုံးရတယ်ဗျ။ ပြည်တွင်းမှာ မီးက မလောက်သေး ဘူးလေ။ မလောက်သေးဘူးဆိုတာက ပြဿနာတွေ အများကြီး
ရှိတယ်ဗျ။ ရန်ကုန်မှာဆို မီးတွေဘာတွေမှောင်၊ ပျက်ပေါ့ဗျာ။ ခဏခဏ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဒါက မီး လောက်အောင် မပေးနိုင်လို့ ထင်တာပေါ့လေ။ ကျနော် ဒီဌာနကို
ဒီဌာနကလည်း မီးတွေရအောင် တအားလုပ်နေတယ်ဗျ။ မီးက လုံလောက်အောင် မထုတ်နိုင်ဘူး ဆိုတာလည်း သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် မီးလိုင်းတွေမှာ ပြဿနာ သွားတွေ့တယ်။ မီးလိုင်းကတော့ ကျနော်တို့ ဌာနက လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အမှတ် ၂ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒါက မီးလိုင်း ကိုင် တယ်။ တချို့ရွာတွေဆို မီးမရဘူး။ မီးလိုင်းမှ မရှိတာကြီးကိုး။ ဗမာပြည် တပြည်လုံး လင်းအောင် ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်း ပိုက်ဆံလိုမယ်။ မီတာ တလုံးတောင်မှ သောင်းနဲ့ချီ ပေးရတယ်ဆိုတော့ ဈေးက တအားကြီးတဲ့သဘော
ရှိတယ်။ ကျနော့်မွေးရပ်ရွာဆို မီးလိုင်းရှိတယ်၊ မီးမရဘူး။ ထရန်စဖော်မာ မဝယ်နိုင်လို့တဲ့။ ထရန်စဖော်မာက ကိုယ့်ရွာက
စုဝယ်ရမှာတဲ့။ ထရန်စဖော်မာ တလုံးကလည်း ရွာတရွာစာဆိုရင် အနည်းဆုံး ၅ သိန်း ၆
သိန်း ပေးရ တယ်လေ။ ရွာလေးတွေကလည်း ဆင်းရဲတော့ ဘယ်ဝယ်နိုင်မလဲဗျာ။ အဲတော့ မီးမရဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာက မီးထုတ်တာ တမျိုးတည်းကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ဒီကိစ္စက ဓနအင်အားနဲ့ ဆိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ သူများနိုင်ငံတွေ တခေါက် နှစ်ခေါက် ရောက်ဖူးပါတယ်။ လင်းလိုက်တာမှ ထိန်နေတာပဲ။
မေး။ ။ လိုင်းလည်းရှိတယ်။ ထရန်စဖော်မာလည်းရှိတဲ့ မြို့တွေကျတော့ရော ဘာ့ကြောင့် မီးအခက်အခဲတွေ
ဖြေ။ ။ကျနော်တွေ့တာက line fault ဆိုတာတခု တွေ့
တချို့ရွာတွေဆို မီးမရဘူး။ မီးလိုင်းမှ မရှိတာ
ကြီးကိုး။ ဗမာပြည် တပြည်လုံး လင်းအောင် ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်း ပိုက်ဆံလိုမယ်။ မီတာ တလုံးတောင်မှ သောင်းနဲ့ချီ ပေးရတယ်ဆို
တော့ ဈေးက တအားကြီးတဲ့သဘောရှိတယ်။ ကျနော့်မွေးရပ်ရွာဆို မီးလိုင်းရှိတယ်၊ မီးမရဘူး။ ထရန်စဖော်မာ မဝယ်နိုင်လို့တဲ့
တယ်ဗျ။ line fault ဆိုတာကတော့ ပြဿနာ တခုခုကြောင့် လိုင်းပြတ်တောက် သွားတာပေါ့။ လိုင်း တခါတခါ fault
ဖြစ်ရင် နိုင်ငံရဲ့ ဓနဥစ္စာက သိန်းဂဏန်းတောင် အနည်းဆုံး ရာရဲ့
အထက်မှာ ရှိတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာ နေ့စဉ် မြို့တိုင်း မြို့တိုင်းမှာ လောင်
လိုက်၊ ပြတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ပစ္စည်းပေါင်း များစွာက ဘယ်လောက် ဓနအင်အား ဆုံးရှုံးမလဲဆိုတာ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ အဲတော့ မီးပြတ်ရခြင်း အကြောင်း ထဲမှာ line fault တွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ နံပါတ်တစ်က ဓန၊ နံပါတ်နှစ်က နည်းပညာပေါ့။ ခုချိန်ထိအောင် line fault တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ capacitance ဆိုတဲ့ capacitor ဆိုတာတော့ လျှပ်စစ်တွေ ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ အိုးကြီး တအိုးပေါ့။ အဲဒီအိုးထဲ လျှပ်စစ်တွေက စီးဝင်သွားတယ်။ အဲဒီအိုးထဲက လျှပ်စစ်က ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ ဘက်ထရီ အိုးကြီးလိုဟာမျိုးကြီးပေါ့။ အဲလို နည်းပညာရော၊ ပစ္စည်းရော မရှိဘူးလေ။ အဲဒီပစ္စည်းက သန်းပေါင်းများစွာ ပေးရမယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ ဆင်းရဲခြင်း အကျိုးဆက်ပေါ့ဗျာ။ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုတစုမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ပိုက်ဆံရရ၊ ဒီနေ့ရတဲ့ ပိုက်ဆံလေးက အိမ်အမိုးမလုံလို့ မိုးလိုက်ရတယ်။ နောက်နေ့ ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးက ဖိနပ် စီးစရာမရှိလို့ ဝယ်လိုက်ရတယ်။ နောက်တရက် ရတဲ့ပိုက်ဆံကျ ဆန်က မရှိပြန်ဘူး… နောက်တရက်… ဟင်းချက်စရာက ပြတ် ဆိုတော့ တခုပြီးတခု ချာလပတ်လည် မလောက်မငှတဲ့ ဝင်ငွေကြောင့်လေ။ မလောက်မငှတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ဓနအင်အားကြောင့် ချာလပတ်လည်နေတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်နေ တာပေါ့ဗျာ။ မေး။ ။ ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေများနေတာ ဘာ့ကြောင့်လို့ ထင်မြင်မိပါသလဲ။
များနေတယ်ဆိုတာက များချင်ယောင် ဆောင်နေတာ။ အင်တာနက်ဆိုတာက ကျနော်တို့ရုံး တရုံးလုံးတောင်မှ ကြည့်နိုင်တဲ့လူက ၄-၅-၁ဝ ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒါတောင်မှ အလကား ပေးထားတာ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ ကြည့်ဖို့ဆိုတာက ပိုခက်တာပေါ့ဗျာ။
ဒီလို အကျိုးမရှိတဲ့ ဟာလေး တမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာကို အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖတ်နေတော့ ဒါတွေကို များတယ်လို့ပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ မေး။ ။ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်း တော်တော်များများရေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖြေ။ ။
ဒါကလည်း နိုင်ငံရေးအရလည်း ပါမယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ သွေးရိုးသားရိုးတွေ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းကျိုး လိုတယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခံရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ဟာက လူသာမန် နားမလည်တဲ့ဟာတွေဗျ။ ကျနော် တို့တောင် နားမလည်တဲ့ဟာတွေကို
အရပ်သားတွေ နားလည်အောင်ရေးဖို့ဆိုတာ တအားခက်တယ်လေဗျာ။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဆင်ကြီးကို စမ်းတဲ့ ပုဏ္ဏားခြောက်ယောက်နဲ့ သွားတူမှာပေါ့ဗျာ။ မျက်စိမမြင်ဘဲနဲ့ နားရွက်လေး သွားစမ်း၊ ခြေထောက်လေး သွားစမ်းတဲ့လူက ပြောတာက
သပ်သပ်ဗျ။ အဲတော့ ဘယ်လိုမှ အမှန်အကန်ကို၊ reality လက်တွေ့ဘဝကို ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်လေ။
မေး။ ။ ဆင်ကြီးဆိုတာ ဒါဆိုတာ ချပြနိုင်အောင် အစိုးရအနေနဲ့ ဒီစီမံကိန်းကြီးအကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချမပြသင့်ပေဘူးလားခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။အစိုးရရဲ့သဘောက တချို့ဟာတွေမှာ လျှို့ဝှက်ချက်
ဆင်းရဲခြင်း အကျိုးဆက်ပေါ့ဗျာ။ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုတစုမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ပိုက်ဆံရရ၊ ဒီနေ့ရတဲ့ ပိုက်ဆံလေးက အိမ်အမိုးမလုံလို့ မိုးလိုက်ရတယ်။ နောက်နေ့ ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးက ဖိနပ် စီးစရာမရှိလို့ ဝယ်လိုက်ရတယ်။
နောက်တရက် ရတဲ့ပိုက်ဆံကျ ဆန်က မရှိပြန် ဘူး… နောက်တရက်… ဟင်းချက်စရာကပြတ်
ဆိုတော့ တခုပြီးတခု ချာလပတ်လည် မလောက်မငှတဲ့ ဝင်ငွေကြောင့်လေ။ မလောက် မငှတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ဓနအင်အားကြောင့် ချာလပတ် လည်နေတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ
တွေ ရှိတယ်ဗျ။ လွှတ်တော်မှာ မေးတာမြန်းတာတွေကလည်း မဖြေနိုင်စရာ တခုမှမရှိပါဘူး။ မဖြေသင့်တာတွေတော့ ရှိ တယ်ဗျ။ မေးတာတိုင်းကို ဖြေလိုက်ရင် တချို့ဟာတွေကျတော့ အစိုးရတရပ် လုပ်ဆောင်မယ့် plan တခုကိုသော်လည်း
ကောင်း၊ အကျိုးစီးပွားတခုကိုသော်လည်းကောင်း ထိခိုက် စေနိုင်မယ့်
ဟာတွေ ရှိတယ်။ စစ်တိုက်သလို ကြည့်မယ်ဆိုရင် plan ကို သိသွားရင် တပန်းရှုံးသွားတာပေါ့လေ။ ဒါကတော့ သာမန်လူတွေ အပိုင်းပေါ့။ ပညာရှင်တွေအတွက်ကတော့ ကျနော်တို့ ဌာနလို တကယ်လုပ်တဲ့ဌာနတွေမှာ လာရောက်ပြီး
လေ့လာ သင့်တာပေါ့။ ဆွေးနွေးသင့်တာပေါ့။ ပညာရှင်ကို ပညာရှင် ချင်းပေါ့။ ဓါးကို ဓါးချင်း၊ တုတ်ကို တုတ်ချင်းပေါ့။
ဒီဆည်ကြီး တည်ဆောက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သက်ရောက်မှုပေါ့ခင်ဗျာ။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်၊ ဒီမြစ်ကြီးအပေါ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် လူထုအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ဘယ်လောက် ထိခိုက်မှုတွေ ရှိနိုင်မလဲဆိုတာ ချပြဖို့ မသင့်ပေဘူးလားခင်ဗျာ။ ဖြေ။ ။
ဒါတွေက ပညာရှင်တွေ အချင်းချင်း လာပြီး ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ သာမန် အရပ်သူအရပ်သားက ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှသုံးသပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူသိချင်မှာကတော့ စားရမှာလား၊ သောက်ရမှာလား၊ မီးလင်းမှာလား၊ နေလို့ကောင်းမှာလား။ အဲဒါတွေ သူသိချင်တာပေါ့။ ပညာရှင်အပိုင်းကတော့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ဘာဖြစ်မှာလဲ၊ ညာဖြစ်မှာလဲဆိုတာကတော့ ဆရာဝန်တယောက်လိုပေါ့။ တချို့ဆရာဝန်တွေ ဆေးကုလိုက်လို့ လူနာတွေ သေသွားတာလည်း အများကြီးပဲဗျ။ တချို့ဆေးတွေကြောင့်မို့လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တာလည်း အများကြီးပဲ။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးဆို သောက်လိုက်လို့ ချောင်းဆိုးလေးတော့ သက်သာသွားပါရဲ့။ လူက အိပ်ပျော်သွားတော့ အလုပ်က ပျက်ရော။ မေး။ ။
ဝန်ကြီးရဲ့ စကားအရဆို ဗမာပြည်အတွက် မီးပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မရှိတဲ့သဘောခင်ဗျ။ ရမယ့် အကျိုးအမြတ်က တရုတ်ဆီက ရမယ့် ပိုက်ဆံပဲ ဖြစ်နေတယ်။
အကျိုးအမြတ်ဆိုတာက နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်လည်း ရှိချင်ရှိမယ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာအကျိုးအမြတ်လည်း ရှိချင်ရှိမယ်၊ တချို့ဟာတွေကျလည်း အချုပ်အခြာ ရှိချင်ရှိမှာပေါ့။ တချို့ဟာတွေကျလည်း ငွေရေးကြေးရေး အကျိုးအမြတ် ရှိချင်ရှိမှာပေါ့။ ပစ္စည်းပစ္စယျ အကျိုးအမြတ်ဆိုတာလည်း ရှိချင်ရှိမှာပေါ့။ အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ တခုခုတော့ ရှိရင် သင့်တော်တယ်လို့တော့ ကျနော်ထင်တာပဲလေ။ ဆုတ်ယုတ်တာရှိရင်လည်း အကျိုးအမြတ်နဲ့ ဘယ်ဟာက ပိုများလဲ အဲလိုပဲ ယှဉ်ရမယ်လေ။
ဒါတွေကတော့ ပညာရှင်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်သွားပါပြီ။ သာမန် အရပ်သူအရပ်သားနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ခင်ဗျား ဂျာနယ်ထဲ ရေးရင်လည်း အပိုပဲလို့ ထင်တယ်။
မေး။ ။ ပြည်သူလူထု သိသင့်သိထိုက်တာကတော့ ဂျာနယ်တွေကတဆင့် ပြောနေ ရေးနေကြရတာပဲခင်ဗျာ။
ရေးသင့်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း poison ဖြစ်မသွားအောင် နည်းနည်းလေးတော့ ချိန်ဆဖို့ သင့်တယ်။ သမာသမတ် ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့ ကျနော်မြင်တယ်။
9/17/2011 05:52:00 PM
ပညာရှင်ချင်း၊ ဓားကို ဓားချင်း၊ တုတ်ကို တုတ်ချင်း ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း ပြောကြား
့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျာနယ်များ၏ရေးသားမှုကို နိုင်ငံရေးအရ သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ကြောင်း ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းက မဇ္ဈိမသတင်းဌာန သို့ ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဌာနသို့ လာရောက် လေ့လာသင့်ကြောင်း၊ ပညာရှင်ကို ပညာရှင်ချင်း၊ ဓားဓားချင်း၊ တုတ်တုတ်ချင်း ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြား ထားသည်။ ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်သော မဇ္ဈိမသတင်းဌာန က ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းအား မေးမြန်းသည့် အင်တာဗျူးတွင် ယခုကဲ့သို့ ဖြေကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများအပေါ် "များနေတယ်ဆိုတာ များချင်ယောင်ဆောင်နေတာ။ အင်တာနက် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရုံး တရုံးလုံးတောင်မှ ကြည့်နိုင်တဲ့လူ ၄၊ ၅၊ ၁၀ ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါတောင်မှ အလကားပေးထားတာ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ကြည့်ဖို့ဆိုတာက ပိုခက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့ဟာလေး တမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာကို အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖတ်နေတော့ ဒါတွေကို များတယ်လို့ ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ" ဟု ၎င်းက ဖြေ ကြားထားသည်။ ပြည်တွင်းဂျာနယ် များရေးသားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ "နိုင်ငံရေးအရပါမယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ် ။ သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းကျိုးလိုတယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခံရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ဟာက လူသာမန် နားမလည်တဲ့ ဟာတွေဗျ။ ကျွန်တော်တို့တောင် နားမလည်တဲ့ဟာတွေကို အရပ်သားတွေ နားလည်အောင် ရေးဖို့ဆိုတာ တအားခက်တယ်လေဗျာ။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ဆင်ကြီးကိုစမ်းတဲ့ ပုဏ္ဍား ၆
ယောက်နဲ့ သွားတူမှာပေါ့ဗျာ"ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားထားသည်။
ထို့အပြင် အကျိုးအမြတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းက "အကျိုးအမြတ်ဆိုတာက နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်လည်း ရှိချင်ရှိမယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာအကျိုးအမြတ်လည်း ရှိချင်ရှိမယ်။ တချို့ဟာတွေ ကျတော့လည်း အချုပ်အခြာရှိချင် ရှိ မှာပေါ့။ တချို့ဟာတွေကျလည်း ငွေရေးကြေးရေးအကျိုးအမြတ်ရှိ ချင်ရှိမှာပေါ့။ ပစ္စည်း၊ ပစ္စယျအကျိုး အမြတ်ဆိုတာလည်း ရှိချင်ရှိမှာပေါ့။ အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ တစ်ခုခုတော့ရှိရင် သင့်တော်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တာပဲလေ။ ဆုတ်ယုတ်တာရှိရင်လည်း အကျိုးအမြတ်နဲ့
ဘယ်ဟာက ပိုများလည်း အဲလိုပဲယှဉ်ရမယ်လေ။ ဒါတွေကတော့ ပညာရှင်ပိုင်းနဲ့ ဆိုင်သွားပါပြီ။ သာမန်အရပ်သူ၊ အရပ်သားနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး" ဟု ပြောပါသည်။ ဆက်လက်၍ "ကျွန်တော်တို့ ဌာနလို တကယ်လုပ်တဲ့ ဌာနတွေမှာ လာရောက်ပြီး လေ့လာသင့်တာပေါ့။ ဆွေးနွေးသင့်တာပေါ့။ ပညာရှင်ကို ပညာရှင်ချင်းပေါ့။ ဓားကို
ဓားချင်း၊ တုတ်ကို တုတ်ချင်းပေါ့" ဟု ၎င်းက ထည့်သွင်း ပြောကြား ထားသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်း အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို နောက်ဆုတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားပြီးနောက် ယခု တစ်ခါရေ အားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းက မြစ်ဆုံနှင့်ပတ်သက်၍
ဖြေကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် (ယနေ့)မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ် သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
﻿ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် ပညာရှင်များ စုဆွေးနွေးပြီး ပြောကြမည်ဆိုပါက ပိုပြီးသင့်တော်မည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးဦး ပြောကြား
စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှိ ပါတီပေါင်းစုံမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့်ပညာရှင်များ စုဆွေးနွေးပြီး ပြောကြမည်ဆိုပါက ပိုပြီးသင့်တော်မည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးဦးက နေပြည်တော်တွင် စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှိ ပါတီပေါင်းစုံမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။NHK မှ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက် ကိုသီဟက "ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ လွှတ်တော် ရှိလာပါပြီ။ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမယ့် လွှတ်တော်ယန္တရား ရှိလာပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်း မှာပဲ
မြစ်ဆုံရေကာတာလို ပြဿနာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကိစ္စက ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ရှိတဲ့တစ်ယောက်က ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဒါကို ဆက်လုပ်မယ်လို့ ပြောသွားပါပြီ။ လွှတ်တော်ကလည်း အစိုးရနဲ့ တစ်သဘောတည်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စဆက်သွားမှာပေါ့။ အကယ်၍များ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရတစ်သဘောတည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြမယ်၊ အပြင်မှာရှိတဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေက ဆက်ဖြစ်ပွားလာမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိမလဲ။ လွှတ်တော်မှာ တာဝန်ရှိမလား၊ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိမလား သိချင်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို ဘယ်လို ထိန်းကျောင်း ကိုင်တွယ်သွားမလဲဆိုတာ
သိချင်ပါတယ်" ဟု မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးဦးက အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။"မြစ်ဆုံနဲ့
ပတ်သက်လို့ သတင်းတွေ အများကြီး ကြားရပါတယ်။ နောက် အခုတလောမှာလည်း ထူးထူးခြားခြားပေါ့ တော်တော်လူပြောသူပြောများတဲ့ သတင်းတွေ ကြားရပါတယ်။ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ ကိုယ်ပြောကြတာပါ။ တစ်ကယ်တမ်း တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် လုပ်ကြမှာပေါ့။ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှ မလုပ်ပါဘူး။ တတ်ကျွမ်းတဲ့၊ နားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေ ဒီလို စုဆွေးနွေး ပြီးတော့ ပြောကြမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးသင့်တော်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အရင်က ကျွန်တော် လယ်/ဆည်ဝန်ကြီးဟောင်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မျိုးစုံပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆည်တစ်ခု
ဆောက်ပြီးတိုင်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ပျက်စီးမယ်တို့၊ ဘာတို့ ပြောကြတာပေါ့။ အကျိုးရှိတာလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ရေမြုပ်သွားတာ လည်းရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုမှာ ဘယ်ဟာက ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်"ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဒွဲဘူက "ကျွန်မတို့ မြစ်ဆုံဒေသမှာ နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် မြစ်ဆုံက လူထုနဲ့ နီးစပ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တကယ် ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်ထဲက လူထုက စိုးရိမ်နေတာ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်မလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ကလည်း လူထုထဲကပါပဲ။ ကျွန်မတို့ ကချင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်း ဒီအင်မတန် ရှားပါးတဲ့ မြစ်တစ်ခုဆုံတာကို ဒီအတိုင်းပဲ ထာဝရစီးဆင်းနေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ဒီဟာကို တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့က တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုကို ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ နားလည်ပါတယ်" ဟု အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ထို့ပြင် ဒေါ်ဒွဲဘူက "လောလောဆယ်မှာ ကျွန်မတို့ စိုးရိမ်နေတာကတော့ ဒီ Dam ကြီး ပေါက်ကွဲလာလို့ရှိရင် ကျိုးပဲ့သွားလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ မြစ်ကြီးနားကလူတွေ
အရင်သေမယ်။ ဒါကိုပဲ အကြီးအကျယ် စိုးရိမ်နေကြပါတယ်"ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
9/16/2011 01:50:00 PM
ကားအစားထိုးလဲခွင့်ကြောင့် ဒေါ်လာဈေး ထိုးတက်
ကားဟောင်းများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ ထက်မပိုသော ကားများနှင့် အစားထိုး လဲလှယ်ခွင့်ပြုမည့် အစီအစဉ်ကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် FEC ၀ယ်ယူသူများကာ ဈေးကွက်တွင် ဒေါ်လာဈေး ထိုးတက် နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာပြည်မှ ကားအိုကားဟောင်းများ (ဓာတ်ပုံ - squierj.freeyellow.com)
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် ၀ယ်ဈေးတဒေါ်လာ ၈၀၅ ကျပ်၊ ရောင်းဈေး ၇၉၅ ကျပ်ဈေးရှိပြီး FEC တယူနစ်လျှင် ၀ယ်ဈေး ၇၇၀ ကျပ်၊ ရောင်းဈေး ၇၆၀ ဖြစ်ကာ ပို့ကုန်ရငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာမှာ တယူနစ်အတွက် ၈၀၈
အမေရိကန်တဒေါ်လာလျှင် ၆၈၀ ကျပ်အထိ ဈေးကျနေရာမှ ယခုကဲ့သို့ တဖြည်းဖြည်း ဈေးပြန်လည် တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
၄၀ ကျော် သက်တမ်းရှိ ကားများကို ဦးစားပေး အစီအစဉ်နှင့် လာမည့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှ စတင် လဲလှယ် ပေးမည်ဖြစ်ရာ ကားလဲလိုသူများသည် ကားဝယ်ရန် ဒေါ်လာဝယ်ယူ စုဆောင်းကြသဖြင့် ဒေါ်လာနှင့် FEC ဈေး ပြန်လည် မြင့်တက် သွားခြင်းဖြစ်သည်။
“ကားလဲပေးမယ့် ရက်နီးလာလေ ဒေါ်လာနဲ့ FEC နှစ်ခုစလုံးပြိုင်တူ ဈေးတက်လာလေပဲ။ Demand က တက်နေတယ်။ ရှေ့လျှောက် ၀ယ်အား
ပိုတက်မယ်။ နယ်စပ်ကလည်း ဒေါ်လာ တောက်လျှောက် ၀င်တယ်။ ၀င်သလောက် အ၀ယ်ရှိတော့
ဈေးမြင့်တယ်” ဟု တရားမ၀င် ဒေါ်လာဈေးကွက်မှ နိုင်ငံခြားငွေကြေး ရောင်းဝယ်သူတဦးက ပြောသည်။
အစိုးရက ပြင်ပဈေးကွက် ဒေါ်လာနှင့် FEC များကို အစိုးရဘဏ်များသို့ ထည့်သွင်း ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပြီး အဆိုပါ ငွေစာရင်းဖြင့် ပြည်ပမှ ကားများ မှာယူတင်သွင်း ရမည်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဘဏ် (MICB) နဲ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် (MFTB) နှစ်ခု စလုံးမှာ နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ ငွေစာရင်းဖွင့်ခွင့် ပေးထားတယ်။ သွင်းလာတဲ့ ငွေကြေးရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အခွန် ဖြတ်တောက်မှု ရှိမယ်။ ဒီငွေကို ပြပြီး ကားသွင်းခွင့် ရမှာပါ” ဟု ရန်ကုန် အခြေစိုက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးက ဆိုသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သိန်းနှင့်အထက် ပြနိုင်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သောင်းနှင့်အထက် ပြနိုင်သော သင်္ဘောသားများနှင့် ပြည်ပတွင် တရားဝင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူ မြန်မာ အလုပ်သမား များကို ကားတင်သွင်းခွင့် ပြုမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်ချိန် ရွှေဈေးလည်း တက်နေပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်က အခေါက်ရွှေ တကျပ်သားလျှင် ၇၃၄၀၀၀ ကျပ် အထိ ဈေးထိုးတက် သွားသည်။
ဆက်ကိုတက်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။ ဒေါ်လာဈေး တက်လေလေ ရွှေဈေးတက်လေ ဖြစ်မှာပဲ။ ရွှေဈေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြား ကုန်ဈေးနှုန်းတွေလည်း လိုက်တက်မယ်” ဟု ရွှေကုန်သည် တဦးက ရှင်းပြသည်။
အစိုးရသည် နှစ် ၄၀ ကျော် ကားများကို စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ အတွင်း နှစ် ၃၀ မှ ၄၀ ကြား ကားများကို နိုဝင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း၊ နှစ် ၂၀ မှ နှစ် ၃၀ အကြား ကားများကို ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီမှ မတ်လအတွင်း လဲလှယ်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သည်။
9/16/2011 01:49:00 PM
လယ်သမားနှစ်ရာနီးပါး ဧ​ရာဝ​တီ​တိုင်း​ဒေ​သ​ကြီး​၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဆီ ချီတက်ဆန္ဒပြ
နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး မြေသိမ်းခံရမှာကို စိုးရိမ်နေတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ငွေဆောင်ဒေသက လယ်သမား ၂၀၀ နီးပါးက ဧ​ရာဝ​တီ​တိုင်း​ဒေ​သ​ကြီး​၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဆီ ဒီနေ့ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
အသိမ်း ခံ ရ သည့် လယ် မြေ တ ချို့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကစလို့ ငါးလုပ်ငန်း​ဦးစီးဌာနက အဲဒီဒေသမှာ လယ်မြေတချို့ကို လျော်ကြေးမပေးဘဲ သိမ်းထားပြီး နောက်ထပ်လည်း သိမ်းဖို့ လျာထားတယ်လို့ မြေစာရင်းရုံးက​တဆင့် သိရတဲ့နောက် တောင်သူတွေက သူတို့ အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေ
လယ်သမား​တယောက်က “အခုလောလောဆယ် သိမ်းထားတာက ၃ ဧကလောက်မှာ ရှိတယ်။ လျာထားတာက ပြည်သူတွေရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေက ဧက ၈၀၀ လောက် ရှိတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကိုယ်ဘာသာကိုယ် လုပ်စားနေရသေးပေမယ့် လျာထားတယ်​ဆိုတာ ရှိနေတော့​နောက်ကြောင်း မအေးလို့ပါ။ စိတ်မချလို့ပါ။ လျာထားစာရင်းကို ဖျက်သိမ်းပေးပါလို့ ကျနော်တို့ တောင်းဆိုတာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
နာမည်ကျော် ငွေဆောင်နဲ့ ချောင်းသာကမ်းခြေ​နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ လယ်မြေနဲ့ ဥယျာဉ်ခြံတွေ​ပါဝင်တဲ့ မြေဧက ၈၀၀ ကျော်ကို ငါးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနက သိမ်းမယ့် အရိပ်အယောင်တွေ ရှိနေတာကြောင့် စိုးရိမ်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဆီ သွားရောက် အရေးဆိုတာလို့ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
လယ်သမားတဦးက​“သူတို့လုပ်ထားတာ ကျနော်တို့မှာ တော်တော်နစ်နာနေတယ်။ နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် သိမ်းတယ် ဆိုရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သိချင်တာပေါ့နော်။ အရောင်းအဝယ် ဆိုရင်လည်း အရောင်းအဝယ်တခုကို အတိအကျ သိချင်တယ်။ အဲဒီလို သိချင်လို့ ကျနော်တို့ကလာတာပါ” လို့ ပြောပါတာယ်။
အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအပါအ၀င် အင်အား ၂၀၀ နီးပါးဟာ မနက် ၁၀ နာရီက ပုသိမ်မြို့ကားဂိတ်ကနေ
ပုသိမ်မြို့တပတ် ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်သွားကြပြီးနောက် မြေသိမ်းဖို့ လျာထားတာကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့စာကို ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးကို ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
မေတ္တာရပ်ခံတဲ့စာကို ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင်ရဲ့ ရုံးက တာဝန်ရှိသူတဦးက လက်ခံပြီး နောက် ၃ ရက်ကြာရင် ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း စုံစမ်းပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ နှုတ်ကတိကိုလည်း ရခဲ့တယ်လို့ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုမှာ လိုက်ပါသွားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်သူများကွန်ရက် (HRDP) က ကိုမြင့်နိုင်က အခုလို ပြောပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကျော် မတရားသိမ်းပိုက်ခံရမှုတွေက ပြေပျောက်သွာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တကယ် အသိမ်းပိုက်ခံရတာတွေဆိုတာ အမှန်တရားပါပဲ။ အမှတ်တရားဖြစ်တဲ့ အတွက် ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
ဒီနေ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ချီတက်မှုကို အရပ်ဝတ်နဲ့ လုံခြုံရေးတွေက လမ်းတလျှောက်စောင့်ကြည့်တာ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေ ရှိပေမယ့် အနှောင့်အယှက်တော့
မပေးဘူးလို့ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
9/15/2011 09:51:00 PM
နိုင်ငံပြောင်းလဲမည့် အခြေအနေရောက်နေပြီဟု ဒေါ်စုပြော (ရုပ်/သံ)
9/15/2011 09:46:00 PM
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တပ်မတော်တွင် နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးမှ အနားယူသွားသူ အထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက မိမိကိုယ်ကို ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား တယောက်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဒီမိုကရေစီနေ့တွင် ပြောသွားသည်ဟု လွှတ်တော်အမတ်များ အပြောအရ သိရသည်။"သူက
စ,စ ချင်းပဲ၊ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါပစေ နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ ကျနော် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား တယောက် အနေနဲ့ ဆိုပြီးတော့ ပထမဆုံးအပိုဒ်မှာ စပြောသွားတယ်။ နောက်အပိုဒ်တွေက စပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ ခင်ဗျာဆိုပြီး အဲဒါမျိုး သုံးသွားတယ်။" ဟု အမတ်တဦးက ပြောသည်။၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် စစ်တက္ကသိုလ် (Defence Services Academy) အမှတ်စဉ် ၁၁ ကျောင်းဆင်း သူရဦးရွှေမန်းက ကြသပတေးနေ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသော သဘင်အဆောက်အအုံ သဘင်ခန်းမတွင် နံနက် ၁ဝနာရီမှ မွန်းလွဲသုံးနာရီထိပြုလုပ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားတွင် ပြောသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းနားသို့ လာတက်ရောက် လာကြသူများကိုလည်း ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများဟု သုံးနှုန်းသွားခဲ့သော စစ်တက္ကသိုလ် (Defence Services Academy) အမှတ်စဉ် ၁၁ ကျောင်းဆင်း သူရဦးရွှေမန်း (သို့မဟုတ်) အထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
"ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားဆိုရင် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေလို့ အဓိပ္ပါယ်ရသွားတယ်၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း သုံးမိရင် နိုင်ငံရေးသမား ဒီမိုကရေစီအကြောင်းကိုပြောရင် ဒီနိုင်ငံမှာ ပြောလို့မရဘူး၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီပြောရင် နိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းသားတွေက ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမယ် ဆိုတဲ့အခါမှာ ဝန်ထမ်းတွေ ကျောင်းသားတွေက ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားကို မသုံးရဲဘူး" အမတ်တဦးက ပြောသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှ
အောက်လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်သူ ဦးခိုင်မောင်ရည်က မိမိတို့သုံးနှုန်းသည့် ဒီမိုရေစီဘက်တော်သားဆိုသည့် ဝေါဟာရသည်၊ ထောင်တွင်းရောက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ တောခိုပြီး စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေသူများနှင့် ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားနေသူများကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ဆိုသည်။သို့သော်
လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ တဦးအနေဖြင့် ယခုလိုပြောခြင်းကို မိမိအနေဖြင့် ကြိုဆိုပြီး၊
ဦးရွှေမန်း၏ ဒီမိုကရေစီအရေး လုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဟုလည်း ဦးခိုင်မောင်ရည်က ဆိုသည်။"လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတယောက် နိုင်ငံ့ Player တယောက်က အဲဒီလိုပြောရဲတာ ဘယ်သူမှ ဒီစကားလုံးတခါမှ မသုံးဘူးဖူး၊ သူက ဒီစကားလုံးကို ဒိုင်းကနဲ့ သုံးချလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒါဟာ ရိုးသားမှုလား သို့မဟုတ် တခုခုကို အလျော့ပေးခြင်းလား ဆိုတာတော့ မသိသေးပေမယ့် ဦးရွှေမန်းသည် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားဆိုတာ စကားလုံး အရတော့ ဖြစ်သွားပြီ" ဟု
ဦးခိုင်မောင်ရည်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးမှုများကို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ လုပ်ဆောင်နေပြီး အစိုးရဌာနများနှင့်အစိုးရမှလည်း ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သူ၏မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်ပြော သွားသည်။နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သဘင်ဆောင်တွင် ပထမဆုံး ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့တွင် လွှတ်တော်ရောက် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ဒီမိုကရေစီစနစ်အပေါ် ယူဆပုံ အသီးသီးကို စာတမ်းအဖြစ် ပြုစုကာ ဖတ်ကြားကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ဒီမိုကရေစီနေ့ကို ဗဟန်းမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွင်လည်း ကျင်းပရာ၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အနေအနေကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သူ၏ ၁ဝ မိနစ်ကြာ မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောသွားသည်။အသက် ၆၄ နှစ်ရှိ သူရဦးရွှေမန်းသည် တပ်မတော်တွင် ၁၉၆၉ ခုနှစ်က စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ရာထူး၊ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁ဝ တွင် တပ်မှအနားယူကာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်အဖြစ် နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်မှ အောက်လွှတ်တော် အမတ်အဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့သည်။ဦးရွှေမန်း ၂ဝ၁ဝ ဖေဖေါ်ဝါရီလ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။
9/15/2011 09:39:00 PM
ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပြီလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို
"ကျမတို့ နိုင်ငံဟာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပြီလို့လည်း ကျမ မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့
ဒါကျမ လူသိရှင်ကြားပြောပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပြီလို့ ကျမ ယုံကြည်တယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေဟာ ပြည်သူအတွက်
တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လို့ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ လုပ်မလဲဆိုတာ
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ တာဝန်သိသိနဲ့ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။"
NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောဆိုနေစဉ်။
NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမမှာ ဒီကနေ့ မနက်က ကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောကြားတာ ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ လူတိုင်း တာဝန်သိသိ စဉ်းစားရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ရချင်ရင်၊ ဒီမိုကရေစီ ခိုင်မြဲချင်ရင်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ မွေးမြူရမှာ ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကို ဒီမိုကရေစီနေ့လို့ သတ်မှတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ အခမ်းအနားမှာ သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်တဲ့ NLD ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦး ကလည်း အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဒီမိုကရေစီ စနစ်သာ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဆီလျော်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ လွတ်လပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ရမယ်လို့ အမျှော်အမြင်
ကြီးစွာ လမ်းညွှန် မိန့်ကြားခဲ့ဖူးကြောင်း အစချီပြီး အခုအခါမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အဆောက်အအုံတွေ အခြေချဖို့ ကြိုးပန်းနေနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးတင်ဦးက ပြောဆိုသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို NLD ပါတီဝင်တွေ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ၈၈-မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားသူ ၂၀၀ လောက် တက်ရောက်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
9/15/2011 09:37:00 PM
၂၀၀၃ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်းတိုးဖို့ အထက်လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်
မြန်မာနိုင်ငံက ပို့ကုန်တွေကို ပိတ်ပင်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံကူညီဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့မှု
ဥပဒေကို အထက်လွှတ်တော်က နောက်ထပ် သက်တမ်းတိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။
၂၀၀၃ ခုနှစ် Burmese Freedom and Democracy Act မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဥပဒေကို နောက်ထပ် သက်တမ်းတိုးဖို့ အထက်လွှတ်တော်က မကြာခင်သေးခင်ကပဲ အတည်ပြုလိုက်တာပါ။
ဒီ ဥပဒေကို သက်တမ်းတိုးဖို့ အောက်လွှတ်တော်ကလည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တာမို့ မကြာခင်မှာ အမေရိကန်သမ္မတက အတည်ပြု လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒီပဲယင်းအနီးမှာ အစိုးရလိုလားသူတွေက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း၊ ဒီ ဥပဒေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ထုတ်ပြန်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရ
ထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ သူတို့နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကို ဒဏ်ခတ် အရေးယူပိတ်ဆိုမှု တွေလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီဥပဒေ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ဖို့၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို အားဖြစ်စေဖိုနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မြန်မာလူထုရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဥပဒေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
9/15/2011 12:38:00 PM
သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန လက်ထောက် အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည် (ခေါ်) တေးသံရှင် ဆခဟ (အသက် ၅၉ နှစ်) သည် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့
Maharaj Nakorn Chiang Mai ဆေးရုံကြီးတွင် အသည်းကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။ဦးစိန်ကြည်သည်
ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းကိုင်မြို့နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး တန့်ယန်းမြို့ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဒဿမတန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂီတနှင့် စာပေဘက်တွင် ၀ါသနာထုံသူတဦးဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး တေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်နှင့်လည်း သူငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစိန်ကြည်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တဦးဖြစ်သည့် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနမှ အယ်ဒီတာ ဦးခွန်စိုင်းက ပြောသည်။“သျှမ်းအနုပညာရှင်ထဲမှာ အင်မတန် လူချစ်များတဲ့သူတဦးပါ။ သျှမ်းသံတော်ဆင့်ရဲ့ လုပ်အားနှုန်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အဓိကလုပ်ပေး နေသူတဦးပါ။ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပဲ” ဟု ဦးခွန်ဆိုင်းက ဆိုသည်။ဂီတနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်း၊ မြန်မာ သီချင်းများကို ကိုယ်တိုင်ရေးစပ် သီဆိုခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်အထိ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ဒဿမတန်းအောင်ပြီးနောက်
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) အဖွဲ့သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဖြစ်သည့် SSA နှင့် ရှမ်းပြည် ညီညွတ်ရေးနှင့် တော်လှန်ရေးတပ် (SURA) တို့ ပူးပေါင်းထုတ်ဝေသည့် “ဂွဏ်းခေါ် စာစောင်” ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ တာဝန်ယူ ထုတ်ဝေခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ဦးစိန်ကြည်သည်
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားများအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနတွင် အစဉ်တစိုက် ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်ရေးရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာများသို့ မကြာခဏ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပြီး မေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။မကွယ်လွန်မီ အချိန်အထိ “၀” တိုင်းရင်းသား နယ်မြေသို့ သွားရောက်လေ့လာကာ တိုင်းရင်းသားများ အရေးကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာ ရေးသားခဲ့သေးသည်။ကွယ်လွန်ချိန်တွင်
ဇနီးနှင့် သားသမီး ၃ ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကျန်ရစ်သည့် ရုပ်ကလာပ်ကို ချင်းမိုင်မြို့ ၀ပ်ပါပေါက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ထားရှိသင်္ဂြိုဟ်မည်ဟု သိရသည်။
9/15/2011 12:11:00 PM
ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်
ယနေ့နံနက် ၈နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရုံးတွင
် ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒုတိယဥကဋ္ဌဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Myit Makha Mediagroup ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
9/15/2011 12:06:00 PM
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် သောင်ရင်းမြစ်ရေ ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာကာ မြ၀တီမြို့ ရပ်ကွက်အချို့ ရေနစ်မြုပ်
မြ၀တီမြို့နယ် အတွင်း စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ညနေပိုင်းနှင့် ၁၂ ရက်နေ့များတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာ သွန်းမှုကြောင့် ၁၂ ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင် သောင်ရင်းမြစ် ရေလျှံတက်ကာ မြ၀တီမြို့ အမှတ်(၁၊ ၂၊ ၃)နှင့် အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်
အနိမ့်ပိုင်းနေအိမ်များ ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ခရိုင်မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များမှ ကယ်ဆယ်နေရာ ချနေရာချထားခြင်း လုပ်ငန်းများကို ညတွင်းချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ညနေ ၄ နာရီကစပြီးရေတက် ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် ညနေ ၆ နာရီ ကျော်တော့ ချက်ချင်းမြင့်တက်လာတာ အိမ်ထဲကို ရေ၀င်လာတော့တာပဲ။ ပစ္စည်းတွေရွှေ့ပြောင်းချိန်မှာ ရေက ခါးလောက်ရောက်နေပြီ”ဟု မိုးကုတ် ဈေးအနီးနေထိုင်သူတစ်ဦးကပြောပြ သည်။
“ရေနစ်မြုပ်တဲ့အိမ်တွေက လူ တွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းငါးခုဖြစ်တဲ့အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ဓမ္မာရုံ၊ တေဇစက္ကီဓမ္မာရုံ၊ ဘုရားကြီး ကျောင်းတိုက်ဓမ္မာရုံ၊ အမှတ်သုံးရပ် ကွက်ရှိ ဓမ္မာရန်အောင်ဓမ္မာရုံ၊ မိုး ကုတ်ဈေး ၊ ဖားခြောက်ကောင်ကျောင်း ဓမ္မာရုံတွေမှာ နေရာချထားပေးပါတယ်”ဟု ကယ်ဆယ်နေရာချထား ရေးဆောင်ရွက်နေသော လူမှုရေးအသင်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြ၀တီ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များရေနစ်မြုပ်မှုမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းရေကြီးမှုကို ရွှေမြင်းဝန်ဘုရားကြီး ပါးစပ်ထိ
ရေရောက်ခဲ့၍ နဂါးရေ သောက်သည့်နှစ်ဟုလည်း ဆိုကြ သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ညွှန်ကြားချက်အရ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ ရပ်ကွက်လေးခုမှ ရေလွှမ်းခံရသည့် အိမ်ခြေ ၁၉၁ လုံး၊ အိမ်ထောင်စု ၂၀၉ စု၊ လူဦးရေကျား၊ မ စုစုပေါင်း ၁၀၉၁ ဦးတို့အား ဆန်း ၄၅ အိတ် ၁၀ ပြည်၊ ကြက်ဥ ၅၄၄၀ လုံးတို့ကို လူတစ်ဦးလျှင် ဆန်တစ်ပြည်နှင့် ကြက်ဥငါးလုံး၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် တစ်ထုပ် ပံ့ပိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် သောက်ရေသုံးရေနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးများကိုလည်း စီစဉ်လှူဒါန်းပြီး နံနက်စာ ညနေစာများကိုလည်း ရပ်ကွက်အတွင်း စေတနာရှင်များက လှူဒါန်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
9/14/2011 09:26:00 PM
စစ်မှန်တဲ့ ဆွေးနွေးမှု စ နေပြီလို့ ဒေါ်စု အချက်ပြ
အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကလက်ရှိ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေး နေမှုကို အားရ ကျေနပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Daw Aung San Suu Kyiတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အစိုးရ ဝန်ကြီးတွေက ရင်းနှီး ဖော်ရွေ တယ်လို့ ဒေါ်စု ပြောအခု လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့မှာ အရင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က ပုဂ0x081ဂိုလ်တွေ ပါဝင်ပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပုံစံနဲ့ သွားမယ်လို့ ပြောထားတဲ့ အတွက် ယခင် ဆွေးနွေးမှုနဲ့ အခု လက်ရှိ ဆွေးနွေးမှုတွေ ကွာခြားတယ်လို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်း သမား တချို့နဲ့ အဂင်0x081ါ နေ့က အန်အယ်လ်ဒီ ရုံးမှာ တွေ့ဆုံပြီး သူတို့ အမေး တွေကို ဖြေကြားစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အရင် ဆွေးနွေးမှုတွေ တုန်းက အကြောင်း အရာ တွေကို တိတိ ကျကျ ဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေမဲ့ အခု အစိုးရသစ် နဲ့တော့ မည်မည် ရရ ကိစ0x081စတွေကို ဆွေးနွေး နိုင်ခဲ့တယ်၊ တိုးတက်မှုတွေ လျင်မြန်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခွင့် ရခဲ့သူ ရန်ကုန် သတင်း မီဒီယာ ဂရုပ်က ဦးကိုကို(စက်မှု) က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။အစိုးရ အဖွဲ့တွင်း တခြား ပုဂ0x081ဂိုလ်တွေ အားလုံးရဲ့ သဘောထားကို မသိနိုင်ပေမဲ့ သမ0x081မတ ဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ကတော့ အမှန်တကယ် စစ်မှန်တဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ် လိုသူ တစ်ယောက် ဖြစ်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ယူဆ တယ်လို့လည်း ဦးကိုကိုက ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘာတွေ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ဖော် မပြောသေးဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောတယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။ပြည်ပကလာတဲ့ အေအက်ဖ်ပီ (AFP) သတင်း ဌာနရဲ့ ထိုင်း အခြေစိုက် ရုံးခွဲ တာဝန်ခံနဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာ ဌာနက သတင်းထောက် တို့ အပြင် ပြည်တွင်းက ရန်ကုန် မီဒီယာ ဂရု, နယူးစ် ဝိခ် (Newsweek) , ဆဲဗင်းဒေး (7 Day) နဲ့ လျှပ် တပြက် သတင်း ဌာန တို့က သတင်းထောက် တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က သီးခြားစီ မေးမြန်းခွင့် ပြုခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က လာမယ့် ရက်တွေ မှာ မအားတဲ့ အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ ပြည်ပ သတင်းထောက် တွေကို မေးမြန်းခွင့် ပေးတဲ့ ဒီ တစ်ရက်ထဲမှာ ပဲ ပြည်တွင်းက ခွင့်တောင်း ထားကြတဲ့ ဂျာနယ် အသီးသီးက သတင်းထောက်တွေကို တွေ့ဆုံခွင့် ပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
9/14/2011 09:20:00 PM
NGO မှ ၀င်လာသည့် ငွေများ USDP ရံပုံငွေ အဖြစ်ဖြတ်တောက်
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ရံပုံငွေသည် ယခင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး အသင်းကာလ ကတည်း က ယနေ့ အထိ ပြည်ပအဲန်ဂျီအိုမှ ရရှိသည့် ၀င်ငွေများအား ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ဖြတ်တောက်လိုက် သော ငွေများ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
” ကျတော်အပါအ၀င်ပေါ့၊ ဖလမ်းမြို့နယ်မှာ ယူအက်စ်ဒီပီ ငွေချေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
၁၀၀ လောက်ရှိတယ်၊ အနည်းဆုံး သုံးသိန်းစီ ချေးတယ်၊ သုံးသိန်းချေးယင် စပေါ် တသိန်း ပြန်ထားရတယ် ” ဟု ယူအက်စ်ဒီပီပါတီ ၀င်တဦးက ပြောသည်။
ငွေတွေကို ၃ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ချေးငှားပြီး အတိုးငွေများကို အဆင့်ဆင့်သော ယူအက်စ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် များ၏ လစာ၊ ရုံးလုပ်ငန်းများအတွက် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
” ဒါတင်မကဘူး၊ လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်အတွက် ဒါဏ်တပ်ငွေနဲ့ အခြား ဘီးခွန်ထဲက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ယူအက်စ် ဒီပီပါတီထံ ပေးရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်ပြီးဟားခါးမြို့မှ မော်တော်ပီကေ တဦးက မူ ” ကျတော်တို့က ဒါဏ်ငွေတွေကို အထက် လူကြီးထံအပ်တယ်၊ အဲဒီငွေကို ပြန်ပြီး ခွဲဝေတယ်၊ ကျန်ငွေကို ဘယ်လိုဆက်လုပ်သလဲတော့ မသိဘူး” ဟု ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်း မြို့နယ်ယူအက်စ်ဒီပီပါတီလစာသည် ခရိုင်တာဝန်ခံ ကျပ်ငွေ ၈၀၀၀၀၊ အတွင်းရေးမှူး ကျပ်ငွေ ၇၀၀၀၀ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီဝင် ၅ ဦး ကျပ်ငွေ ၂၅၀၀၀ စီ ရရှိကြသည်။
အလားတူ ကျန် ချင်းပြည်နယ် ၈ မြို့နယ်စလုံးရှိ မြို့နယ် ယူအက်စ်ဒီပီ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီ ၀င်များ လည်း လစာ ရရှိကြကြောင်းသိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရမှ တဆင့် ယူအဲန်ဒီပီ၊ ယူနီဆက်ဖ် စသည့် အဲန်ဂျီအိုများ ၀င်ရောက်ပြီး အိန္ဒိယ အစိုးရမှ ဒေါ်လာ ၈ သိန်းကိုလည်း ယူအက်စ်ဒီပီပါတီမှ စီမံခန့်ခွဲမည်ဟု သတင်းများအရ သိရသည်။
9/14/2011 09:16:00 PM
အမည်ခံ အရပ်သား အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက် ၄ လအကြာ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု
လွှတ် တော်ကို သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပြီး၊ လာမည့် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည် နယ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် ပြည်နယ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ပြည်နယ်အစိုးရတွင်း မပါ ၀င်သည့် လွှတ်တော်အမတ်များ၏ အနေအထားနှင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် မည်သည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို ရှင်း ရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပေ။
ယင်းကိစ္စအတွက် ၂၀၁၀ ရွေး ကောက်ပွဲ တွင် ချင်းပြည်နယ်မှ အမတ်(၁၁)ဦး ရွေးကောက်ခံထားရသော ချင်းတိုးတက် ရေးပါတီ (စီပီပီ) ၏ ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်း မြို့နယ်အမှတ် (၁) မဲဆန္ဒနယ်မြေမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြောက်ခံရသော ဦးနာ့ထန်း ကို ခိုနူမ်းထုန်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။
မေး ။ ။ မကြာခင်ကျင်းပမယ့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ဦးနာ့ထန်းအနေနဲ့ ဘာတွေတင်ပြဖို့ စီစဉ်ထားလဲ?
ဖြေ ။ ။ လွှတ်တော်မှာက တကြိမ်မှာ ကဏ္ဍ ၄ ချက်ထက် ပိုမတင်ပြရဘူးဆိုပြီးတော့ နည်းဥပဒေထဲမှာ ပြဌာန်းထား တယ်။ ဒါကြောင့်
ကျနော်တို့ ကြိုက်သလောက်လည်း တင်ပြလို့မရဘူး၊ အဲဒီတော့ ဖလမ်းမြို့နယ်အနေနဲ့က စံချိန်မှီ ဘော်လုံးကွင်း မရှိဘူး၊ ပြီးတော့ ခရိုင်မြို့တမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ ယနေ့ထိ ဂေါက်ကွင်းလည်း မရှိသေးဘူးပေါ့လေ၊ အဲလိုဟာမျိူး၊ ပြီးတော့ ရိဒ် – ဖလမ်း-ဝေဘူလ-ကလေး ကားလမ်းက (Maintenance) ပြုပြင်မှုမရှိဘူး ဒါမျိုးတွေ တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ပထမအကြိမ် ခေါ်ယူကျင်းပတဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် နဲ့ အခု ပြန်ခေါ်မယ့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မခေါ်ခင် စပ်ကြားကာလမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေ အနေနဲ့ ဘာလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဘာမှလုပ်စရာမရှိပါဘူး၊ ၀န်ကြီးအဖွဲ့တွေကတော့ သူတို့လုပ်စရာတွေတော့ရှိမှာပါ၊ ကျနော်တို့ကတော့ ဘာမှကို လုပ်ကို မလုပ်ရသေးတာ ဘာလုပ်ငန်းမှကို မစရသေးဘူး။
မေး ။ ။ ပထမအခေါက် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကနေ ဦးနာ့ထန်းကို ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ ဥပဒေပြုရေးကော်မီတီ ဥက္ကဌ အဖြစ်
ခန့်အပ်ထားတယ်နော်၊ အဲဒီ ကော်မီတီ အနေနဲ့ ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဘာမှမရှိသေးဘူး၊ အလကားနေရတာပါဘဲ၊ ဥပမာ ဘာနဲ့တူလည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို အင်တာဗျူးဖြေတယ် ဖလမ်းမြို့ကနေ နှစ်ယောက်အောင်တယ်၊ ကျနော် နှင့် ကျနော့် သူငယ်ချင်း ဦးနိုးဆွမ်ပေါ့လေ၊ စားပွဲ ကုလားထိုင်တော့ပေး တယ် လစာလည်းပေးတယ်ပေါ့လေ၊ ခဲတံ စာရွက်တွေတော့မပေးဘူး၊ ဘာလုပ်ပါဆိုပြီး ခိုင်းတာလည်းမရှိဘူး၊ လုပ်ပိုင် ခွင့် လည်း ဘာမှမပေးသေးဘူး။
မေး ။ ။ ဦးနာ့ထန်းတို့အနေနဲ့ ရုံးမတက်ရဘူးလား?
ဖြေ ။ ။ ရုံးရယ်လို့ကို လုံးဝမရှိဘူး၊ တခါတလေ ခုလို ဟားခါကိုသွားပြီးတော့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သွားတက်တာမှ အပ ဘာမှရုံးလည်းမရှိဘူး ဒီလိုဘဲ အလကားနေရတာ။
မေး ။ ။ အစိုးရဘက်ကနေ ရုံးတွေဘာတွေ စီစဉ်ပေးတာ မရှိဘူးလား?
ဖြေ ။ ။ ဘာမှမရှိဘူး၊ ဖြစ်ပုံက ကျနော်တို့က ထွေအုပ်(မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူး) ရဲ့ လက်အောက်မှာ နေရမလိုလို ဘာလိုလို ဘယ်သူကမှ ကျနော်တို့ကို ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူး။
မေး ။ ။ ပြည်သူလူထုတွေကရော ဦးနာ့ထန်းတို့လို ပြည်နယ်အမတ်တွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ဘယ်လို ဆက်ဆံကြလဲ?
ဖြေ ။ ။ လူထုတွေက ကျနော်တို့ကို လွှတ်တော်အမတ် ဆိုမှန်းတောင် မသိကြဘူး၊ ကျနော်တို့ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုမှန်း တောင်မှ ဂရုကိုမစိုက်ဘူး၊ ဥပမာ ဌာနဆိုင်ရာတခုလက်အောက် ၀န်ထမ်းတယောက်ကို ကျနော်တို့က နည်းနည်းပါးပါး သူတို့ဌာနဆိုင်ရာ လစ်ဟင်းမှုရှိတယ် အဲဒါပြောလိုက်တယ်၊ ကျနော်တို့ကို ဘာမှဂရုစိုက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့ကို သူတို့ အရွယ်လောက်များ မှတ်လားမသိဘူး၊ အဲလိုဘဲ ဆက်ဆံတယ် အင်မတန်မှ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒါတွေက ဘာကြောင့်လဲဗျ?
ဖြေ ။ ။ စနစ်ကိုက သေချာအပြောင်းအလဲ မရှိသေးလို့ဘဲ ထင်တယ်။ ပြီးတော့ လူထုတွေကိုက ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှသဘောမပေါက်ကြဘူး။
မေး ။ ။ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ဒါမှမဟုတ် ၀န်ကြီးးချုပ်ကရော ဦးနာ့ထန်းတို့လို ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမတ်တွေကို
အလုပ်ကိစ္စ တိုင်ပင်တာ ဆွေးနွေးတာတို့ မရှိဘူးလား?
ဖြေ ။ ။ ၀န်ကြီးချူပ်က ကျနော်တို့ အမတ်တွေကို တိုင်ပင်တာ မရှိပါဘူး။
မေး ။ ။ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဟုန်းငိုင်းကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။ ချင်းပြည်နယ်အတွက် တကယ် အလုပ်လုပ်မယ့်လူ လို့ မြင်လား?
ဖြေ ။ ။ (ပြောဖို့) နည်းနည်း စောသေးတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ခုက လေး ငါး ခြောက်လ လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ သူ့အနေနဲ့လည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း ကောင်းကောင်း သိဦးမယ်မထင်ဘူး။
မေး ။ ။ ကျန်တဲ့ ချင်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးအဖွဲ့တွေကရော ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲ?
ဖြေ ။ ။ နေ့တိုင်းတော့ခရီးထွက်နေကြတာဘဲ၊ လုပ်ကြပါတယ်။ နေ့ရောညပါ ဘာလုပ်မှန်းတော့ ကျနော်တို့ မသိရဘူး။
9/14/2011 09:15:00 PM
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ရှုတ်ချရာတွင် ရခိုင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများလည်း ပါဝင်
စက်တင်္ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တော မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အမတ် ကို အရှုံးပေးခဲ့သည့် ရွှေးကောက်ပွဲကော် မရှင်ကို ရှုတ်ချရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီး သုံးဦးလည်း ပါဝင်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
၉ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ် ၁၈ ဦးက အနိုင်ရ ပေါက်တောမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်ဇံအား ရွှေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ခုံရုံးကအရှုံးပေး လိုက်ခြင်း အပေါ် ကျေညာချက်ထုတ်ပြန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရာ ထိုအထဲတွင် ရခိုင်ဝန်ကြီး သုံးဦးလည်း ပါဝင်သည်။အဆိုပါ ကျေညာချက်ထဲတွင်" ပြည်သူလူထု အပေါင်း၏ ရွှေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော ပြည်သူ့ကိုယ်စား ပြု ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအား နိုင်ငံရေး ပြိုင်ဘက်များနှင့်
ယင်းတို့၏ နောက်ကွယ် အင်အားများက နိုင်ငံရေး အရ လုပ်ကြံမူကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်လိုက်ရသော ပေါက်တောမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်ဇံ၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမူ အတွက်လည်းကောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ များ၏ မျှော်လင့်ချက် ဆန္ဒ ပျက်သုဉ်းရခြင်း၊ စိတ်ပျက်ဖွယ် ရလာဒ်များ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအတွက် လည်းကောင်း ကျွနုပ်တို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက လုံးဝ လက်မခံနိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းလုပ်ရပ် အပေါ် ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကြောင်း သဘောထား ထုတ်ပြန် ကြေညာအပ်သည်" ဟု ပါရှိသည်။ရွှေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အား
တခြား လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် အတူ ရှုတ်ချရာတွင် ပါဝင်သူ ပြည်နယ် ၀န်ကြီး
များမှာ ဦးသာလူချေ ( လျှပ်စစ်နှင့် စက်မူလက်မူ ၀န်ကြီး)၊ ဦးကျော်သိန်း (
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ၀န်ကြီး) နှင့် ဦးအောင်သန်းတင် ( သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန်ကြီး) တို့ ဖြစ်ကြသည်။အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပိုပြီး သိရှိနိုင်အောင် မေးမြန်းရန် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သော်လည်း ပြည်နယ် ၀န်ကြီးများနှင့် ဆက်သွယ်မူ မရရှိခဲ့ပါ။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ၏
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ရွှေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် ရှုတ်ချကန့်ကွက်ခြင်းမှာ ဒုတိယ အကြိမ် ဖြစ်ပြီး ပထမ တကြိမ်ကလည်း အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးက လက်မှတ်ရေးထိုး ကျေညာချက် ထုတ်ပြန်ကာ ရွှေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လူသိရှင်ကြား ရှုတ်ချ ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ရွှေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
တရားခုံးရုံးသည် ပေါက်တောမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ဦးအောင်ကျော်ဇံအား ပြိုင်ဘက် ကြံ့ဖွံ့ ပါတီ ဦးထွန်းအောင်ခိုင်ထက် မဲအရေအတွက် ၁၉၉၉၉ အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လည်း ဦးအောင်ကျော်ဇံအား အရှုံးပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ နိုဝင်္ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော ရွှေးကောက်ပွဲတွင် ဦးအောင်ကျော်ဇံမှာ မဲ ၃၀၅၅၀ ရရှိခဲ့ပြီး ကြံ့ဖွံ့ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းအောင်ခိုင်မှာ ကြိုတင်မဲများ အပါအ၀င် မဲစုစုပေါင်း ၁၁၅၅၁ မဲသာ ရရှိခဲ့သည်။ယခုကဲ့သို့ ရွှေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဆန္ဒကို မလေးစားဘဲ တရားမျှတမူ မရှိဖက်လိုက် ကာ ဆုံးဖြတ်မူမှာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွှေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အပေါ် ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မူ တရပ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။
9/14/2011 09:13:00 PM
သတင်းထောက် ကိုစည်သူဇေယျကို နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်တိုး
သတင်းထောက် ကိုစည်သူဇေယျ ကို အီလက်ထရောနစ် ပုဒ်မ (၃၃-ခ) နဲ့ နောက်ထပ် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် အင်းစိန်ထောင် အထူးတရားရုံးမှာ ဒီကနေ့ ညနေက အမိန့်ချမှတ် လိုက်ပါတယ်။
ကိုစည်သူဇေယျကို အရင်က ပုဒ်မ- ၁၃ တရားမဝင် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်မှု၊ ပုဒ်မ - ၁၇ မတရားသင်း ဆက်သွယ်မှု စတဲ့ ပုဒ်မနှစ်ခုနဲ့ မြန်မာ အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက စွပ်စွဲပြီး ထောင်ဒဏ် (၈) နှစ် ချမှတ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ထပ်ချလိုက်တဲ့ ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ်နဲ့ ဆိုရင် စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် (၁၈) နှစ်
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုစည်သူဇေယျရဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးဒေဝက RFA ကို အခုလို အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
" ၁၀နှစ်ပါ။ ပုဒ်မ (၃၃-ခ) အီလက်ထရောနစ် ပုဒ်မလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြည်ပက မတရားအဖွဲ့အစည်းတွေကို အင်တာနက်က ဆက်သွယ်ပြီး သတင်းပေးတယ်ပေါ့။ ဘာမှ complaint တက်လို့ မရတော့ဘူးလေ။ ဒါ တရားသူကြီး အမိန့်ချသွားတာဘဲ။ အဲဒီလိုတော့ ကြိုတင်ပြီးတော့ တွက်ဆထားပြီးသားပါ။"
ကိုစည်သူဇေယျကို ဖခင်ဖြစ်သူ စာရေးဆရာ ဦးမောင်မောင်ဇေယျ ခေါ် သားကြီးမောင်ဇေယျနဲ့အတူ ၂၀၁၀ ဧပြီလ က ရန်ကုန် သင်္ကြန် X2O မဏ္ဍပ်ရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အပြီး၊ ဗုံးကွဲတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက် သတင်းယူမှုနဲ့ စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် အသီးသီး ချမှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာ လင်းယုန် မောင်မောင်ရဲ့ သားနဲ့မြေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်ဇေယျတို့ သားအဖ အပါအဝင် သတင်းထောက်တွေကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချနေတာကို နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များ အဖွဲ့ RSF က မြန်မာ အစိုးရကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချလိုက်ပြီး သူတို့ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်း တောင်းဆို တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်။
9/14/2011 09:11:00 PM
ဧရာပုံရိပ်၊ ရှေးအတိတ်လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်လောက်ကပင် ဤဆောင်းပါးကိုရေးရန် တာစူခဲ့သည်။ အခြေအနေစောင့်ကြည့်ရင်း
အချိန်အတော် ကုန်သွားသည်။ ခုတော့ 'ငိုရှာလေပြီ ဧရာဝတီ' ကိုရေးဖြစ်ပါသည်။ မိခင်ဧရာဝတီ၏ သမိုင်းကြောင်းကား ရှည်ညောင်းလှလေပြီ။ ဧရာဝတီသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၅ သန်းကျော်ကပင် ရှိနေခဲ့သည်ဟု မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ ၁၅ တွင် ရေးသားထားပါသည်။ မိခင်ဧရာဝတီသည် ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုမြို့မြောက်ဖက် 'ထိလာ ရေခဲတောင်'၊ 'လန်ဂွေရေခဲတောင်' များတွင် ချောင်းဖျားခံ၍ မေခ၊မလိခ မြစ်နှစ်သွယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
မလိခ ဆိုသောစကားမှာ ကချင်စကား Mali Hka မှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ကချင်ဘိုးဘွား လေးဦး စတင်ဖြတ်သန်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ကချင်ဘာသာတွင်
မလီ (mali) မှာ ၄ဖြစ်၍ မင် manga မှာ ၅ ဖြစ်သည်။ပေပေါင်း ၁၅၅၀၀ ကျော်မြင့်သော နှင်းဖုံးတောင်တန်းကြီးများမှ စတင်ခဲ့သော ဧရာဝတီသည် ပြည်ထောင်စုသား အားလုံး၏ မိခင်ကျေးဇူးရှင် ပင်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ သယံဇာတ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းအားလုံးကို မိခင်ဧရာဝတီက ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိသည်။ 'ဧရာ'ဟူသော အရေးအသားကို ရှာဖွေသောအခါ စစ်ကိုင်းမြို့ ရတနာစေတီ ကျောက်စာတွင် တွေ့ရ၏။ ကျောက်စာ သက်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အင်းဝရွှေနန်းကြော့ရှင် လက်ထက် ခရစ်နှစ် ၁၄၈၅ခုကပင် ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဧရာဟူသော အရေးအသားကို ထို့ထက်စော၍ ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ဧရာဝတီ၏ အဓိပ္ပာယ်နန်ချောင်ရှမ်းတို့က
'လူပေ' ၊ မောရှမ်းတို့က 'နမ့်ကျို'ဟု အမြတ်တနိုးခေါ်ခဲ့ကြသည်။ နမ့်ကျိုဆိုသည် မှာ နမ့်=ရေ+ကျို=ကျောက်မျက်ရတနာဟူ၍ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ဧရာဝတီဆိုသည်ကား 'ကျာက်မျက် ရတနာများထွက်သော နေရာ' ဟု ဆိုလိုပေသည်။ တရုတ်တို့ကမူ ဤမြစ်ကြီးကို 'လိရွှေ' ဟုခေါ်သည်။ ရွှေမှုန်များဖြင့် လင်းလက်နေသော ရွှေသဲမြစ်ဟုဆိုလိုပေသည်။ တရုတ်တို့က သူတို့၏ ယန်စီမြစ်ကြီးကိုလည်း လိရွှေဟုပင်ခေါ်ကြသည်။အချို့က ဧရာဝတီဟူသည် ဟိန္ဒီစကား ဣရ၀တီမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိပ္ပာယ်မှာ 'ဆင်မြစ်ကြီး' ဟုခေါ်ကြောင်း၊ စားသောက်ဖွယ်ရာ ရတနာမျိုးစုံကိုရစေနိုင်သဖြင့် ဆင်မြစ်ခေါ်ကြောင်း ရေးသားပြောဆို ကြလေသည်။ သင်္သကရိုက်ဘာသာတွင် ရှိသော (ပရုမတီ)မှာ အားသစ်ဖြည့်သူဟု ဆိုရာ 'ဤဧရာဝတီမှာ အားမာန်တက်စေသည့်မြစ်' ဟုသာဆိုရပေတော့မည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုပါမူဧရာဝတီသည် ရွှေသဲမြစ်၊ ရတနာမြစ်၊ လှပသောမြစ်၊ ဆင်မြစ်၊ အားသစ်ဖြစ်လာသောမြစ်ဟု ဆိုနိုင်ပေရာ သိင်္ဂါနဒီ မြန်ပြည်မြောက်ဖျားမှ ဘင်္ဂလားပင်လယ်သို့တိုင် မိုင်ပေါင်း ၁၃၅၀ ကျော်စီးဆင်းသွားသော မိခင်ကြီးတစ်ပါးသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။မြစ်ကျဉ်းလေးခု ဖြစ်တည်မှုမိခင်ဧရာဝတီကို
အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲ၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အထက်ပိုင်းဧရာဝတီ၊ အလယ်ပိုင်း ဧရာဝတီနှင့် အောက်ပိုင်းဧရာဝတီ (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ) ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အထက်ပိုင်းဧရာဝတီ တန်ဖဲဇွပ် (Tang hpe' zup)တွင် အကြာကြီး နေဖူးသည်။ Zup ဇွပ်ဆိုသော ကချင်စကားမှာ (ဆုံခြင်း၊ တွေ့ဆုံမှု) ပင်ဖြစ်သည်။ မေခနှင့် မလိခတို့ဆုံရာဖြစ်၍ တန်ဖဲဟု ခေါ်ကြသည်။ တန်ဖဲ အရှေ့ရွာများတွင် နှစ်နှစ်ခန့်စခန်းမှူး တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က မြစ်ဖျားဧရာ ရောင်စုံဖြာနေပုံကို နေ့စဉ်ထိုင်ကြည့်ဖူးသည်။အလွန်လှပသောကျောက်ဆောင်၊
ကျောက်တန်းများ၊ ဝေ့၀ိုက်စီးဆင်းနေသော ရေအလျဉ်များမှာ တသသဖြင့် မေ့နိုင်စရာမရှိပါ။ မြစ်ဆုံတွင် ကချင်ကလေးငယ်များရေကစားနေပုံကို သတိရမိသည်။
တန်ဖဲမှ တောင်ဖက်သို့ ၂၆ မိုင်ဆင်းသွားလျှင် မြစ်ကြီးနားမြို့ အရှေ့ဖက်ကမ်းမှ ၀ိုင်းမော်မြို့များကိုတွေ့ရမည်။ ၀ိုင်းမော်တွင် သုံးနှစ်ကျော်စစ်ကြောင်းမှူး လုပ်ခဲ့သည်။၁၉၅၀ ခု ကျွန်တော်တို့ မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် 'ဗန်းမော်ထက်အောက်၊ ရွှေမန်းမြောက်မှတ်လောက် ပြည်အထက်'ဟု အတန်းပိုင်ဆရာမက ဧရာဝတီမြစ်ရှိ မြစ်ကျဉ်းလေးခုအကြောင်း သင်ပေးပါသည်။ သို့အတွက် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၀ကပင် မိခင်ဧရာဝတီကို ကောင်းကောင်းသိခဲ့ရ၏။ပထမမြစ်ကျဉ်းသည် ဗန်းမော်မြို့ အထက်ဖက်တွင်ရှိသည်။ ဗန်းမော်မရောက်မီ ဆင်ဘိုရွာအနီး မြစ်သာနှင့်သုံးမိုင်အကွာ၌ ထိုမြစ်ကျဉ်းရှိသည်။ မြစ်နေရာမှာကျဉ်းလွန်းလှ၍ သင်္ဘောကြီးများခုတ်မောင်းသွား လာရန်အခက်အခဲရှိသည်။ မြစ်မင်းဧရာ၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ကျောက်ကမ်းပါးကြီးများကို မတ်စောက်စွာတွေ့နေရသည်။ အရှေ့ဖက်နှင့်အနောက်ဖက်ကမ်းပါးနှစ်ခုမှာ ပေသုံးလေးရာကျော်သာဝေးသည်။ ကိုက်ဖြင့်တွက်လျှင်ကို ၁၀၀၊ ၁၅၀ သာရှိသည်။ ထိုမြစ်ကြောင်းအလယ်ကောင်မှသင်္ဘောများကို တဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းတက်ရ၏။ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းသည်ဗန်းမော်နှင့်
ရွှေကူအကြားတွင်ရှိသည်။ ရွှေကူအနီး စင်းခန်းရွာတစ်ဝိုက်၌ ထိုမြစ်ကျဉ်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ ပထမမြစ်ကျဉ်းလောက် ကြောက်စရာမရှိ၊ မြစ်ပြင်နည်းနည်းကျယ်သည်။ ရှုခင်းများကလည်း ကောင်းသည်။ ထိုမြစ်ကျဉ်းတွင် နတ်မျက်နှာတောင်နှင့် ဥဒေါင်းတောင်များရှိသည်။ မြတ်စွာဘုရား ဥဒေါင်းမင်းဖြစ်စဉ်က စံနေခဲ့ဖူးသဖြင့် ဥဒေါင်းတောင်ဟုခေါ်ကြသည်။ ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းတွင် လှေငယ်တစ်စင်းဆန်တက်နေပုံကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့သည်။
တတိယမြစ်ကျဉ်း၊ ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းကိုကျော်မိလျှင်ဗန်းမော်အောက်ဖက် ၃၅ မိုင်အကွာ ရွှေကူမြို့သို့ရောက်သည်။ ဘာသာသာသနာ ထွန်းကားသောမြို့ဖြစ်၏။ ရွှေကူမှ ဆင်းသွားလျှင်ကသာ။ ထိုမှတစ်ဆင့် သပိတ်ကျင်းသို့ ရောက်သည်။ သပိတ်ကျင်းအထက်ဖက် ၁၀ မိုင်အကွာ မလည်ရွာတစ်ဝိုက်တွင် တတိယမြစ်ကျဉ်းရှိသည်။ ထိုနေရာတွင် ဧရာဝတီမြစ်အကျယ်မှာ ကိုက် ၅၀၀ သာသာရှိသဖြင့် ပထမ၊ ဒုတိယမြစ်ကျဉ်းများလို စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမရှိ။
စတုတ္ထမြစ်ကျဉ်း - ရွှေမန္တလေးမှ အောက်သို့စုန်ဆင်းသွားလျှင် ချင်းတွင်းနှင့်ဧရာဝတီဆုံရာ ရေစကြို၊ ပခုက္ကူသို့ရောက်သည်။ မြစ်ဆုံအောက်ဖက်တွင် ချောက်၊ ရေနံချောင်း၊ မကွေးမြို့များရှိသည်။ ချောက်ရေနံချောင်းမြေလွှာမှာ ကျောက်စရစ်သဲမြေ၊ မြေကမူများဖြစ်သည်။ ရေနံများစွာထွက်၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်နေသောနေရာဟု ခေါ်ရမည်။ မကွေး၊ မင်းဘူးကျော်လျှင် ပြည်မြို့နှင့်နီးသွားသည်။ အနောက်ဖက်ကရခိုင်ရိုးမ၊ အရှေ့ဖက်က ပဲခူးရိုးမညှပ်လျက်ရှိရာ ထိုနေရာတွင် စတုတ္ထမြစ်ကျဉ်း ဖြစ်နေလေသည်။တန်ဖဲမြစ်ဆုံ အရေးကြုံပြီဧရာဝတီမြစ်ကျဉ်းများကို
ဖော်ပြနေသည်မှာ မြစ်ညာဖက်အထက်ပိုင်းတွင် ရေနည်းလာလျှင်မြစ်ကျဉ်းများ၍ မည်မျှဒုက္ခရောက်နိုင်သည်ကို သိစေလို၍ဖြစ်သည်။ နွေအခါေ၏ ရေပါးချိန်ဆိုလျှင် ပြည်မြို့အနီးမြစ်ကျဉ်း၍ ရေစူးလေးပေ၊ ငါးပေသာ ရှိပါသည်။ တန်ဖဲမြစ်ဆုံ
ရေကာတာစီမံကိန်းကို လွန်ခဲ့သောကိုးနှစ်၊ ၁၀နှစ်အချိန် ၂၀၀၁ခုနှစ်က စခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ဤကိစ္စမှာ သာမန်မဟုတ်။ တရုတ် အင်ဂျင်နီယာ ပါရဂူများကို ခေါ်လာပြီး ပမာဏတိုင်းထွာရေး (Survey) များလုပ်ခဲ့သည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဒေသတွင် အနည်းဆုံး ဆည်ကြီးခုနစ်ခု၊ ရှစ်ခု တည်ဆောက်မည်ဆိုသည်။ ဆည်တစ်ခုသည် အလျား ပေ ၅၀၀xအနံ ပေ ၃၀၀ နှင့်အမြင့် ပေ ၅၀၀ ရှိမည်ဆိုသည်။ဆည်များမှာ သိုလှောင်အား အလွန်ကောင်းပြီး စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားပါက ဓာတ်အားကီလိုမီတာဝပ် ၆၀၀၀ ပို့ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက်ရှိ၏။ တစ်နေ့လျှင် ကီလိုမီတာ နာရီသန်းပေါင်း ၂၉၄၀၀ ထိ ယူနန်သို့
ပို့နိုင်အောင် တရုတ်ပညာသည် ၁၀၀ ကျော်တို့က ဆောင်ရွက်နေကြလေသည်။ မြစ်ဆုံမှ
ယူနန်အထိ ၂၆၁ မိုင်၊ မြစ်ဆုံမှ လိုင်ဇာထိ ၁၇၀ မိုင်ရှည်သော ကတ္တရာလမ်းများလည်း ဖောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်၏။ယခုအခါ တန်ဖဲမြစ်ဆုံ ရေကာတာများတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းမှာ နိုင်ငံ၏အဓိကအရေးကိစ္စဖြစ်လာလေပြီ။ လူတစ်ယောက်၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဦးခေါင်းပိုင်းသည် အရေးကြီး၏။ ဦးခေါင်းကိုထိခိုက်လျှင် တစ်ကိုယ်လုံး ပျက်စီးနိုင်သည်။ ယခုအခါ မြစ်ဖျားဧရာ ဦးခေါင်းပိုင်း၌ ပြဿနာများ ပေါ်နေပြီဖြစ်ရာ ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်တွင် နေထိုင်ကြသည့် ဧရာဝတီ၏သားသမီးတို့လည်း ဒုက္ခမျိုးစုံ ရောက်ကြရပေတော့မည်။ မြစ်ကြီးဝဲယာတွင် သစ်တောများပြုန်းတီးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ဇီဝမျိုးစုံ သေကျေခြင်း၊ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် သဲသောင်များ ပေါ်ထွန်းပြီး ရေကြောင်းသွားလာမှုခက်ခဲခြင်း၊ မြစ်လယ်တွင် ဘော့နီဘော့နက်များ စိုက်၍ ရေကြောင်းပြပေးရခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်နေကြရလေပြီ။ပြည်မြို့မှ မန္တလေးမြို့သို့ ပြေးဆွဲနေသည့် ပြည်ကူးတို့သင်္ဘောမှာ နွေအခါတွင် ကောင်းစွာခုတ်မောင်းနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြင်းခြံသင်္ဘောဆိပ်တွင် သောင်ထွန်းနေသဖြင့် သောင်ထိုးစက်များ သုံးနေပါသည်။ ရေကြောင်းကြပ်သဖြင့် ပခုက္ကူမှဆန်တက်လာသည့် ပြည်ကူးတို့မှာ မြင်းခြံဆိပ်၌ ညမအိပ်နိုင်တော့ပါ။ မြင်းမူ၊ စစ်ကိုင်းရောက်အောင် တိုက်ရိုက်ဆန်သွားရသည်။ မြင်းခြံသင်္ဘောဆိပ်တွင် ရေစူးလေး ငါးပေသာကျန်တော့သည်။ အချို့သင်္ဘောများ သောင်တင်နေကြပါသည်။ ဤသို့ ဖြစ်ပေါ်နေသော မိခင်ဧရာဝတီ၏ အခက်အခဲများကို လေ့လာ၍
'ငိုရှာလေပြီ ဧရာဝတီ' ဟု မိမိတင်စားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါ အမိဧရာဝတီမြစ်၏ ဒုက္ခပေါင်းစုံကို မြင်တွေ့ပြီး စာရေးသူမှာလည်း ဧရာဝတီကိုချစ်သူ၊ ဧရာဝတီကို ထာဝရရှင်သန်နေစေလိုသူဖြစ်သည်။ စာရှုသူများအနေဖြင့်လည်း ဧရာဝတီ၏ကျေးဇူးကို နှလုံးသွင်းကာ မိခင်ဧရာဝတီ တည်တံ့ရေးအတွက် နှိုးဆော်လိုက်ရပေသည်။ကျမ်းကိုး- မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၁၅- သိင်္ဂါနဒီမြန်ပြည်မြောက်ဖျား (မဆလထုတ်)
9/14/2011 09:10:00 PM